♪ Angel Shaper: 2009
A Lonesome Birthday!
Angel ရေးတဲ့ A For နဲ့က For တဲ့။
ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်း တပိုင်းတစ်စလေးများ
မိတ်ဆွေမရှိ၊ ကိတ်မရှိ၊ မွေးနေ့အနမ်းလေး ပေးမဲ့ ချစ်သူမဆိုထားနှင့်
သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်း၊ ချစ်ခင်သူ မိဘဆွေမျိုးအားလုံးရဲ့ အဝေးမှာ
အထီးကျန်ခြင်းတွေ၊ လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေ၊ သတိရခြင်းတွေနဲ့
အဲဒီနေ့ ကိုယ့်ပါးပြင်ထက်ဆီကို တကူးတက တွေ့ထိ ခုန်ဆင်းလာတဲ့
ဝိုင်အဖြစ်နဲ့ ပြုံးပြုံးလေး သောက်သုံးလိုက်မိတယ်။
(အဲဒီအပြုံးလေးတွေ ပီပြင်တယ်၊ မပီပြင်ဘူးဆိုတာတော့ ကိုယ်လဲ မသေချာခဲ့ပါဘူး)
10.12.09 ( Thur;)
အလုပ်ထဲမှာဗျာ (၁) မှာ မကျနပ်ချက်တွေ ဖွင့်ထုတ်ဖူးတယ်မို့လား။ ဒီတစ်ခါ အလုပ်ထဲမှာ အသစ်ရလာတဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမသစ်တွေ အကြောင်း ကြွားရင်း အလုပ်ထဲမှာ ပေါခဲ့တောခဲ့ကြတာလေးတွေ အဲလေ... ပျော်ခဲ့ပါးခဲ့ကြတာလေးတွေ ရေးချင်ပါတယ်။
Angel Shaper တစ်နှစ်လုံး ဒီဆိုင်မှာ တစ်ဦးတည်းသော မြန်မာဖြစ်နေတာ။ ပြန်ခါနီးမှပဲ သူငယ်ချင်းသစ်တွေ ရလာတယ်။ တစ်ယောက်တည်းတုန်းကတောင် တစ်ဆိုင်လုံး ဗြောင်းဆန်နေအောင် သောင်းကျန်းခဲ့တာ ခု Angel Shaper အပါအဝင် မြန်မာလေးယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစား၍သာကြည့်ကြပါကုန်။
Angel Shaper ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာ အရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့ အကိုသူငယ်ချင်းအသစ် မင်းမင်းပါ။ သူကတော့ အေးအေးလေးနဲ့အင်မတန်အစအနောက်သန်တဲ့သူ၊ Angel Shaper ရဲ့ ထမင်းဗူးကို တာဝန်ယူရတဲ့ သူပါ။ နောက်တစ်ယောက်က ကြိုင်ကြိုင် (ခ) ကြိုင်ကြီးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ကိုကြိုင်သင်းပါ။ သူကတော့ ငါးပိကြော် ဗူးလေးနဲ့ချဉ်ရည်ဟင်းလေး ပုံမှန်နီးပါး ထည့်လာပေးတဲ့သူပေါ့။ နောက်တစ်ယောက်က ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ကျော်ဇင်ပါ။ တစ်ခါမှ ဟင်းမချက်ဖူးပါတဲ့။ သူချက်လာတဲ့ ဟင်းမှန်သမျှ ကောင်းလွန်းလို့ ကိုယ်တွေကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
Angel Shaper က တစ်ဦးတည်းသော သူတို့ ရဲ့ ညီမတော်ဆိုတော့ Break အရင်ယူရပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ကိုသားကြီး ညီမ သမီးကြီးပဲ အစားဆိုရင်တော့ အဟဲဟဲ.......သိတယ်ဟုတ်။ ထမင်းဗူးတွေ ဟင်းဗူးတွေ တစ်ပုံကြီးကို မစားခင် အပြင်ကိုလာကြွှားရတာအမော။ " ကြည့်ကြစမ်းပါဦးဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့များ ကျွန်တော် ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို ခုများမှ ရတာလဲ။ တစ်လပဲရတော့မဲ့ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်သင့် ဟီးးးးးဟီးးးးးး " ဆိုပြီးထွက်အော်ရင် သူတို့ တွေ သာမက ဆိုင်ကလူတွေ အကုန် တဟားဟား အော်ရယ်ပြီး အားကျရတဲ့ အဖြစ်ဗျာ။ ကိုယ်ကလဲ သူတို့ ချက်လာတဲ့ ဟင်းတွေ မှန်သမျှကို ညီမငယ်ပီသစွာ အားပေးခဲ့ရတာ ပေါ့နော်။
နောက်ပြီး အူကြောင်ကြောင်ကောင်တွေများ အကိုတော်တွေဆီကတဆင့် "စကားပြောရင်၊ ရယ်ပြုံးလိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ကောင်မလေးလေ သူ့ ကို ဒီကဒ်လေး ပေးပေးပါ။ သူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါ" ဆိုပြီး သူတို့ ကဒ်တွေများ ပေးထားခဲ့တာတို့ ဘာတို့ညာတို့များဆိုရင်တော့ ဆွဲဖြဲကြတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တော့ တစ်ခါတလေ ပေးကြတယ်။ ဟဲဟဲ...ဆိုင်က ဘော်ဘော်ကြီး ( Soul လို့ခေါ်တဲ့ Morocco က Arabic ပါ) ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးကြတယ်။ ဘော်ဘော်ကြီးကို ခေါ်မိလို့ကတော့ မလွယ်ဘူးမှတ်ပါ။ သူက အသေစားတာပါဆို (ခေါင်းပြောတာ) ဟိဟိ။ ပြီးတော့ သူက ကိုယ့်ရဲ့ ဖိုက်တာလေ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ပြသနာမှန်သမျှ လိုက်ရှင်းပေး၊ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အားကိုးရသူ ဘော်ဘော်ကြီးပေါ့။ အဲသလိုပေါ့ ကိုယ့်ကို ရိသဲ့သဲ့ လာရိရင်တော့ အကိုတော်တွေကော ဘော်ဘော်ကြီးကော နည်းမျိုးစုံနဲ့ ငကြောင်တွေကို ပညာပြပေးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ညီမကို ဘယ်သူကများ တစ်ပါးသူလက်ထဲ ရောက်အောင် ကူညီမလဲလေနော်။ အဲလို စိတ်ချရတဲ့ ဘော်ဒီကဒ်တွေ ရထားတယ်။ အဟဲ...
ဆိုင်ကို မြန်မာတွေ စကားတွတ်ထိုးပြီး ဝင်လာတာမြင်ရရင်ဖြင့် လေးယောက်သား တပြုံးပြုံးနဲ့ဘာမှဝင်မပြောပဲ နောက်ကနေ ဘယ်လိုစရမလဲချောင်းပြီး တစ်ခုခုမေးမှ မြန်မာလိုပြန်ဖြေပေးလိုက်ရင် ဟိုက ကြောင်သွားတာတို့၊ လန့်ဖြန့်သွားတာတို့ ဖြစ်ရော။ အကိုတစ်ယောက် လာလည်တုန်းကဆို လေးယောက်သားလုပြီး စကား လိုက်ပြောကြတာ အမောဗျာ။ ပြီးရင် လေးယောက်သားလုပြီး ပြည်တွင်းဖြစ် ( made in Myanmar) တွေကို လိုက်ကြွားရတာ၊ လိုက်ကြော်ငြာရတာ အမောဗျာ။ ဈေးကလဲ အကြီးဆုံးဗျ။ အဲလိုနဲ့ အဲဒီအကိုကြီးဆို နားပူလို့နေမယ်။ နောက်မလာရဲတော့ဘူး ဟီးးဟီးးးးးးးး အမှန်က SPRINGFIELD ဆိုတာ SPAIN BRAND ပါ။ ဈေးအကြီးဆုံး၊ ဒီဇိုင်းအလှဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံက ထုတ်တာပိုများသလိုဖြစ်နေတော့ ကြွားကြတာပေါ့ဗျာ။ ဂုဏ်လဲယူမိပါတယ်။ ဒီလေးယောက်လက်ချက်နဲ့လာသမျှ မြန်မာတွေမှာ ခေါင်းတွေ မူးနောက် သွားလောက်အောင်ကို ဧည့်ဝတ်ကျေခဲ့ကြတယ်။
နောက်တစ်ခါကတော့ ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ ဘော်ဘော်ကြီးတို့ METRO ရထားစီးတိုင်း ဆုံနေကျ မမလှလှ နှစ်ယောက် ဆိုင်ကိုလာတဲ့ တစ်နေ့ပေါ့။ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆိုင်မှာ အကျီ င်္တွေလာကြည့်ကြတယ်။ စကားကလဲ တွတ်ထိုးပြီး ပြောနေကြလေရဲ့။ အကျင့်အတိုင်းစနောက်ကြဖို့ မျက်စပစ်ပြီးကြပြီလေ။ ဘော်ဘော်ကြီးက သူတို့နှစ်ယောက်ကို Metro စီးရင်အမြဲတွေ့တယ်။ ချောတယ်။ သူတို့ ဘာစကားပြောတာလဲ နားထောင်ကြည့်။ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို ဝင်ရောခိုင်းတာပေါ့။ မြန်မာလားတဲ့။ ကိုယ်က သိပေမဲ့ မသိသလိုနေဦး။ နားထောင်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး သူတို့ကို လိုက်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ Fitting Room ထဲ အကျီတွေ ဝတ်ကြည့်နေတဲ့ ပြောင်အိုကြီး ( အဘိုးကြီး မို့လို့ပါ) ထွက်လာတော့ သူတို့ တွေတစ်ဖွဲ့တည်း ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတော့တယ်လေ။ ဘော်ဘော်ရော ဟိုသုံးယောက်ရော တစ်ယောက် တစ်လှည့်ကြည့်ပြီး မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားရတာပေါ့။ ဘော်ဘော်ကြီးကတော့ ရုပ်ချောလို့ ကိုယ့်ကို ဝင်ရော ခိုင်းတာ အဘိုးကြီးနဲ့ ဖြစ်နေလို့ပေါ့။ ကိုယ်တွေကတော့ သိတယ်မလား နှမြောမိတာပါ။ ကိုယ့်အမ ချောချော လှလှလေးတွေကို လူမျိုးခြား အဘိုးကြီးလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရသလို ခံစားရတာပါ။ ဘော်ဘော်ကြီးက သူတို့ ထွက်သွားပြီးတော့မှမေးတယ် " မြန်မာလား" တဲ့။ ကိုယ်ကလဲ အညံ့မခံ "အရူးးးးးးး နင်ဂျပန်လိုမတတ်ဘူးလား။ သူတို့ ဂျပန်လိုပြောနေတာလေ။ ဟွန်းးးးးး " လို့အရူးကွက်နင်းပြီး သူ့ ကို ဟောက်စားလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကဂျပန်လို နှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲ တတ်တာလေတဲ့။ အမှန်ကိုယ်ဆို ဂျပန်လို ဟယ်လို လို့တောင် နှုတ်မဆက်တတ်ပါဘူး။ အဲဒီ မမလှလှလေးတွေကိုတော့ မစမနောက်လိုက်ရပါဘူး။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ကိုယ့်ရင်အစုံကို နင်းခြေသွားသလိုကို ခံစားရပါတယ်။ တကယ်နှမြောမိတယ် မမတို့ရေ။
အဲ......ကျန်ပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ လူမျိုးခြားတွေကို ကြိုက်သလိုနာမည် ပေးခေါ်တတ်ကြသေးတယ်။ ဥပမာ ထိပ်ပြောင်လေး ဆိုရင် (ပြောင်ကလေး၊ ပြောင်လေး)ပေါ့။ ထိပ်က နဲနဲပိုပြောင်ရင် (ပြောင်ကြီး)ပေါ့။ ကတုံး ဆိုရင်တော့ကတုံးပါပဲ၊ တခြားကတုံးတွေကိုတော့(ဆံရှည်)၊ ဆံပင်နဲနဲပဲပေါက်ပြီး ထိပ်ကလေးကွက်ပြောင်နေရင် (ကွက်ကလေးပြောင်)၊ အဲလို အမျိုးမျိုး နာမည်ပေးပြီးခေါ်တတ်ကြတယ်။ တစ်ခါဆို ပြောင်ကြီးတစ်ယောက် အကျီ ဝတ်ကြည့်နေတာ သူနဲ့မတော်လို့ နောက်ဆိုဒ်တစ်ခုတောင်းတယ်။ သွားရှာပေးပြီး ပြန်လာတော့ သူက တံခါးကို ပြန်ပိတ်ထားတယ်လေ။ ကိုယ်လဲ ဘယ်လိုခေါ်တယ်မှတ်လဲ "ပြောင်ကြီးရေ... "လို့ခေါ်လိုက်တာ ဟိုက "ရားးးး" တဲ့ "အလဲ့။ နားလည်တယ်။ ထူးတတ်တယ်တော့" ဆိုပြီး လေးယောက်သား ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့။ နောက်တစ်ခါ မင်းမင်း အလှည့်မှာတော့ "ပြောင်ကြီးရေ.. "ခေါ်တာ ဟိုကမထူးဘူးဗျာ။ သူလဲအကြံကုန် "အဖေရေ...."လို့ ခေါ်လိုက်ကော ဟိုက "ဝေးးးးးးးး" တဲ့ဟဟားးးးးးးးးးးးးး မင်းမင်းခံလိုက်ရတာလေ။ အချောင် ကုလားထိပ်ပြောင်ကို အဖေတော်လိုက်ရတယ်။ အဟိ အဲလို အဲလိုတွေဗျာ။
ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေများ သူတို့မောင်ငယ်လေးတွေအတွက် ဈေးဝယ်လာရင်တော့ အဲဒီ ကောင်လေးတွေက ဟိုသုံးယောက်ရဲ့ ယောက္ဖ ဆိုတဲ့ နာမည်ရရောပေါ့။ ကောင်လေးက အကျီ င်္ဝတ်ကြည့်တယ်။ "အဆင်ပြေလား" မေးရင်း ဟိုဘက်ကို "ကြည့်စမ်း ကြိုင်ကြိုင် ငါ့ယောက္ဖလေး "ဆိုပြီး တဖက်ကိုတော့ "ယောက္ဖရေ Size, Ok! " လက်မထောင်ပြလိုက်တာ ဟိုကလဲ "အိုကေ" ပေါ့။ ဟဟားးးးးးးး ကြားထဲက ကောင်လေးငယ် ခမျာ သူ့အမချောချောလေးကို ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။
ကုလားချောချောလေးတွေများ သေချာပြုံးပြပြီးကူညီပေးကြည့်ပါလား အကိုတော်တွေက လိုက်စတတ်ပါတယ်။ " ကြည့်စမ်း၊ ကြည့်စမ်း သူ့ကောင်ကိုတော့ ပြုံးပြုံးကြီး ကူညီပေးနေတယ်။" ဆိုတာမျိုး။ "နှာခေါင်းကြီးကို ကြည့်ပါဦးဟယ်။" ဆိုတာမျိုး လိုက်စတာ။ ကိုယ်ပဲသိနားလည်တော့ "သေမယ်။ သေမယ်နော်။ ဟွန်းးးးးးးး " လို့ပဲ လိုက်ကြိမ်းနေရတယ်။
လေးယောက်သား ဈေးဝယ်သူတွေကို ခင်ခင်မင်မင် စနောက်ကြတယ်။ ပျော်အောင်နေကြတယ်။ စည်းလုံးကြတယ်။ အားလုံးလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ကိုယ်က အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမယ့် စီနီယာလိုဖြစ်နေတော့ တစ်ခုခု မေးလို့ ကိုယ်က တစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် "ရှည်လာပြီနော်။ ရှည်လာပြီ။ စိတ်စိတ်။ စိတ်ရှည်လာပြီ" ဆိုပြီး မာန်မဲ မိတတ်သေးတယ်။ သူတို့ကတော့ ခွင့်လွတ်ပါတယ်။ ဗွေမယူကြပါဘူး။ ဒီဆိုင်မှာ သူတို့ကြောင့်ပဲ ကိုယ့်မှာ မောင်နှမ ရတယ်ဆိုပြီး အားတွေပိုရှိလာတာ၊ ပိုပျော်လာတာပါ။ ဘာပဲပြောပြောပေါ့။ ဒီဆိုင်၊ ဒီကုမ္ပဏီမှာ မြန်မာတွေ ရိုးသားတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ဆိုတာတွေကို ကြားရတာ အရသာရှိသလို ဂုဏ်လဲယူမိပါတယ်။ သူတို့ကိုလဲကိုယ်က လိုအပ်တာတွေပြောပြရင်း၊ အကြံပေးနိုင်သလောက်ပေးရင်း (တနည်းအားဖြင့်တော့ စွာပုံ၊ စွာနည်းပေါ့) ပျော်ပျော်ကြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်တစ်ပတ်ပြီးရင် ဒီမောင်နှမတွေကို ခွဲရတော့မယ်။ ခွဲသွားဖို့ အင်အားတော့မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ခွဲကြရဦးမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေ အမှတ်ရနေဦးမှာပါ။
နောက်မှ ဆက်မယ်ဗျာ။ ခေါင်းအားကြီးကိုက်နေပြီ။
စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ စွန်းထင်းမှုကဗျာလေးတွေ ဖန်တီးနေတဲ့ ဖေကြီး (ကိုအောင်သာငယ်)က တစ်ဦးတည်းသော သူ့မွေးစားသမီးလေးမို့ ချစ်ခင်စွာနဲ့ တက်ဂ်ထားပါတယ်။ ဖေကြီးကပြောတယ်၊ "သမီး တက်ဂ်ပိုစ့် ရေးရဦးမယ်နော်။ ရူးချင်ယောင်ဆာင်လို့မရဘူး " ဆိုလို့ ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မယ်မယ်ကိ ကလဲ "အိမ်ကျယ်နေကျမို့ချန်ထားလို့မကောင်း " ဆိုပဲ၊ နောက် သူငယ်ချင်းလကြီး (တလနွန်) ကလဲ တက်ဂ် ထားသေးတယ်။ မောင်လေးခွက်ခွက် (ခ) ခွက်ကြီး (အဆိပ်ခွက်) ကလဲ "မအိန်ဂျယ် တက်ဂ်ထားတယ်နော် လာဖတ်လှည့် " ဆိုလို့ ပြေးသွားလိုက်တာ သူက ကိုယ့်ကို ခေါင်းမစားစေချင်တဲ့ စေတနာလေးနဲ့ ရေးလို့ လွယ်အောင် နာမည်လေးကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး တမူထူးအောင် တက်ဂ်လိုက်တော့လဲ သူတက်ဂ်သလို ဖြူစင်ကြယ် ကနေ က ဖော် ကြယ်စင်ဖြူ နဲ့ပဲ ကရင်းရေးလိုက်ရပါတော့တယ်လေ။
Rules: It's harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers, enter yours. Use the first letter of your name to answer each of the following questions. If the person before you had the same first initial, you must use different answers. You cannot use any word twice and you can't use your name for the boy/girl name question.
1. What is your name : ANGEL
2. A four Letter Word : ABLE
3. A boy's Name : ANTHONY
4. A girl's Name : ABBY
5. An occupation : ACTRESS
6. A color : AQUA
7. Something you'll wear : ACCESSORY
8. A food : AN ICE-CREAM
9. Something found in the bathroom :A WATER, A SOAP, ETC.... ဒါအကြံကုန်ပဲ။ (ဟိဟိ မှတ်ကရော)
10. A place : ABUDHABI ( DUBAI, UAE)
11. A reason for being late : ( ANYWAY, I'M LATE AGAIN; WON'T GIVE ANY EXCUSES.)
12. Something you'd shout : ACTION STATIONS!
13. A movie title : AIR FORCE ONE
14. Something you drink : AMERICAN WINE
15. A musical group : ABBA
16. An animal : ANTELOPE
17. A street name : ALMUTEENA ( DEIRA, DUBAI )
18. A type of car : ASTON MARTIN RED
19. The title ofasong : AGAINST ALL ODDS ( MARIAH CAREY )
20. A verb : AGE ( We Age Every Day, What A Depressing Thought! )
ခွက်ကြီးရဲ့ က ဖော်ကြယ်စင်ဖြူ လေးလဲ အားပေးသွားကြဦးလေ။
1.What is your name : ကြယ်စင်ဖြူ ( အမှန်က ဖြူစင်ကြယ်ပါနော်)
2. A four Letter Word : ကြီးကျယ်လိုက်တာ
3. A boy's Name : ကြိုင်သင်း
4. A girl's Name : ကြည်အေး
5. An occupation : ကြွက်သတ်ဆေးရောင်းသည်။
6. A color : ကြက်သွေးရောင်
7. Something you'll wear : ကြည်လင်တဲ့ အပြုံး ( အဟဲ)
8. A food : ကြာဇံသုပ်
9. Something found in the bathroom : ကြည့်မှန် တစ်ချပ်
10. A place : ကြုံတိုင်းရွာ ( ကိုကိုတွတ်တို့ ရွာပေါ့... အဟီးးးးးးး)
11. A reason for being late : ကြာသွားလို့ နောက်ကျတာ။
12. Something you'd shout : ကြာကြီး ကြောင်ကြည့်နဲ့နော်။ ကြက်ဆူဆီနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်စားပစ်မယ်။ ဘာမှတ်နေလဲ...ဟွန်းးးးးး
13. A movie title : ကြိုးတစ်ချောင်း (မြင့်မြတ်၊ မောစ့်၊ ခင်လေးနွယ်)
14. Something you drink : ကြံရည်
15. A musical group : ကြယ်အုပ်စု ( ဟဲဟဲ)
16. An animal : ကြက်တူရွေး
17. A street name : ကြာညိုလမ်း
18. A type of car : ကြုံရာကား ( တလွဲမတွေးရ... ကြုံရာ= အဆင်ပြေရာ) ဟိဟိ
19. The title ofasong : ကြင်နာသူနှစ်ဦး ဆုံနိုင်ရင် ( တင်ဇာမော်)
20. A verb : ကြွားဝါသည်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပေါက်ကရ အဖြေလေးတွေ၊ ချစ်ခင်မှုနဲ့ တက်ဂ်တဲ့ ဖေကြီး၊ မယ်မယ်ကိ၊ လကြီး၊ ခွက်ကြီး တို့ ကျေနပ်နိုင်ပါစေလို့ .....
15.10.09 ( Thur;)
လူကြီး အသက် (၂၇) နှစ် သည် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က သူ၏ချစ်သူ ကလေးထံမှ ပျောက်သွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားစေလိုပါသည်။
လူကြီး၏ ထင်ရှားသော အမှတ်အသားများမှာ-------
၁။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် မျက်ဝန်းနက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၂။ နူးညံ့သည့် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၃။ လန်းဆန်းလတ်ဆတ်သည့် အပြုံးများ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၄။ သစ္စာရှိခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်း
၅။ ယောကျာင်္းပီသသော ခန္ဓာနှင့် လူပီသသော စိတ်ဓာတ်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၆။ သူ၏ချစ်သူအား ကလေးတစ်ယောက်လို ဖြူစင်၍ ချစ်ပါသည်ဟုဆိုကာ ကလေး ဟူ၍တင်စားခေါ်ဝေါ်တတ်ခြင်း
၇။ ချစ်သူအား အစွမ်းကုန်အလိုလိုက်ကာ ဆိုးနွဲ့ ခွင့်ပေးတတ်ခြင်း
၈။ ချစ်သူကို အလွန်ချစ်သော အချစ်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၉။ ချစ်သူ၏ အချစ်များအားလုံးကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၁၀။ ချစ်သူအား ရိုသေ၊ တန်ဖိုးထားသော စည်းကမ်းရှိသည့် နှလုံးသားတစ်စုံ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
၁၁။ ချစ်သူ စိတ်ကောက်လျှင် ရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးကာ ဖြူစင်သည့်အနမ်းများနှင့် ပြန်ချော့တတ်ခြင်း
၁၂။ ချစ်သူ စိတ်အလိုမကျ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေလျှင် လက်ကလေးဆုပ်၍ နဖူးလေးနမ်းကာ အားပေးနှစ်သိမ့်တတ်ခြင်း
၁၃။ ချစ်သူ၏ အားနည်းချက်များအား သူ၏အကြင်နာများနှင့် ပြုပြင်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ခြင်း
၁၄။ ချစ်သူ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲနာကျင်ကာ ဝေဒနာခံစားနေရလျှင် ဆေးလိမ်းပေးရင်း သူသာ ထိုဝေဒနာများအား ယူပစ်လိုက်ချင်သည် ဟုတဖွဖွပြောကာ ကြင်နာယုယတတ်ခြင်း
၁၅။ ဆေးသောက် အလွန်ကြောက်သော ချစ်သူအား ဖျားနာလျှင် ဆေးချော့တိုက်ကာ ပြုစုတတ်ခြင်း
၁၆။ ချစ်သူ ဆိုပြသော သီချင်းများကို ဝေဖန်အကြံပေးကာ အားပေးနားဆင်ပေးတတ်ခြင်း
၁၇။ ချစ်သူနှင့် ရုပ်ရှင်အတူကြည့်၊ သီချင်းအတူနားထောင်ခြင်းအား အလွန်မြတ်နိုးတတ်ခြင်း
၁၈။ ချစ်သူ၏ ဆန္ဒများအား အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောပေးတတ်ခြင်း
၁၉။ ပေါက်ကရပြောတတ်သော ချစ်သူအား ဗိုက်ခေါက်ဆွဲကာ ဆုချတတ်ခြင်း
၂၀။ ချစ်သူအား မိန်းမ မဆန်စေလိုခြင်း
................စသော စသော အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံသော သူမှာ ကလေး၏ချစ်သူ လူကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။
တွေ့ ရှိပါက အကြောင်းကြားစေလိုပါသည်။
ဖြားယောင်းသွေးဆောင် လက်ခံထားသူများအား ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာအရေးယူမည်။
လူကြီး ရောက်ရာ အရပ်မှ အမြန်ပြန်လာပါ။
လူကြီးကို လွမ်းနေသည်။ စိတ်လဲ ပူနေသည်။
7.10.09 ( Thur;)
ကိုဇောင်း ချစ်ခင်မှုနဲ့ တက်ဂ်ထားတဲ့ပိုစ့်လေး သူတောင်မေ့နေပြီထင်တယ်။ ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းများ ဆိုပဲ။
ကိုယ်က သီချင်းညည်းတယ်ဆိုတာထက် အာပြဲကြီးနဲ့ အော်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးတာပိုများပါတယ်။ အင်း ကိုဇောင်းက ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းဆိုတော့လဲ ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းပဲပေါ့လေ။ သီချင်းကတော့ အမြဲလိုလို အော်ညည်းဖြစ်တော့ အကုန်ချရေးရမယ်ဆိုရင် ပိုစ့်ရှည်ကြီးဖြစ်ဦးမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်နားထောင်နေကျ၊ အော်ဆိုနေကျ သီချင်းလေးတွေထက် ခုလတ်တလော တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေနဲ့ အတူညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေပေါ့ဗျာ။
ခုရက်ပိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ ပြသနာလေးတွေအတွက် စိတ်ညစ်ညူးလို့ အားငယ်နေချိန်မှာတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Gospel သီချင်းလေးတွေ ညည်းရင်း ခွန်အားယူဖြစ်ပါတယ်။
God Will Make A Way, Where There's seems to be no way,
He walks in way we can not see He will makeaway for me
He will be my Guide hold me closely to His side with love and strength for each new day
ခုလိုချိန်မှာ သူ့ ကို အပြင်းအထန် သတိရနေမိတယ်။ ( သူ=အမည်မသိ..ဟိဟိ မမေးရနော်။) သူ ကိုယ့်ကို ပထမဆုံး စပြီး ပေးခဲ့တဲ့ လက်ရွေးစင်သီချင်းက အဲလက်စ်ရဲ့ သီချင်းပါ။
သူ့ ကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်မှုတွေနဲ့ ညည်းနေဖြစ်မိတာ မမှားပါဘူးနော်။
သီချင်းလေးက ကလေးရယ် တဲ့။
ကလေးရယ်.... ဘာကြောင့် မင်းလေးနဲ့တွေ့မှ ကိုယ့်စိတ်တွေယိုင်လဲ
ကလေးရယ်.... အချိန်ရှိတိုင်းပဲပေါ့ မျက်စိထဲ မင်းအရိပ်တွေပါပဲ
ကလေးရယ်.... ကိုယ်ဟာ ပျော့ညံ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရူးလို့နေရမှာလား
အတွေးလေးထဲလဲ မင်းက ကလေးပါပဲ
ကလေးရယ် မင်းမြင်တတ်ရင် တွေ့မှာပဲ ရင်ထဲကသံယောဇဉ်
မင်းနဲ့ကျမှ ချစ်တတ်ပြီ ကလေးရယ်... အသည်းလေးထဲက ချစ်မိပြီ
မင်းနဲ့ကျမှ ရူးရပြီ ကလေးရယ်....မစဉ်းစားပဲနဲ့ ချစ်လိုက်တာ ငါမှားယွင်းနေလား
ကလေးရယ်.... ဘယ်အချိန်တုန်းက မင်းအသည်းထဲ ရောက်လို့နေတာလဲ
ကလေးရယ်.... ငါအလိုလိုက်ခဲ့သမျှ သိပ်ချစ်လို့ မင်းနားလည်ပါဦး
ကလေးရယ်.... ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ မင်းလေးနဲ့ ခွဲလို့ မနေနိုင်ဘူး။
Let Me Be Your Hero ဆိုတဲ့ Enrique Iglesias ရဲ့ အသံလေးက သူ ကိုယ့်နားထဲကို ဖွဖွလေး လာပြောနေသလို ခံစားခဲ့ရတဲ့ စာသားလေးပါ။ ခုတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရွတ်မိနေပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်မတုန်းးးးးး
You can take my breath away..........
ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ ကိုယ်တကယ် ကြိုက်လွန်းလို့ ညည်းရုံတင်မက ခုထိ ဖုန်း Ring Tone တောင် ဒီသီချင်းလေး ထည့်ထားတာ။ ဒီသီချင်းသံကြားရင် ဖုန်းထရှာနေမိတတ်တယ်။
Shayne Ward ရဲ့ No Promises
Hey Baby, When we are together, doing things that we love,
I don't want to let go, girl, I just need you to know girl.
I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight, No Promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms, Here Tonight.
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ SClub7 ရဲ့ Have You Ever
Have you ever loved and lost somebody, wished there wasachance to say I'm sorry,
can't you see, that's the way i feel about you and me, baby,
have you ever felt your heart was breaking, looking down the road you should be taking,
i should know, coz i loved and lost, the day i let you go......
ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ အဲလိုခံစားပြီးတော့ Anne Murray ရဲ့ You Needed Me ဆိုတဲ့သီချင်းလဲ ညည်းဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံး Some Body's Me ဆိုတဲ့ Enrique Iglesias ရဲ့ ခပ်ဆွေးဆွေး သီချင်းလေး ညည်းရင်း ဆွေးဖြစ်တယ်။
And I pray at night, that our paths will cross.
And what we had isn't lost.
Cause you're always right here in my thought.......
ကိုဇောင်းရေ.... နောက်ကျမှ ရေးပေးတဲ့ ညီမအလိမ်မာလေးကို မုန့်အဝကျွေးပြီး ဆုချဖို့ စောင့်နေနော်။ ဟဲဟဲ။ ကိုဇောင်းနဲ့ သမီးရဲ့မောင်နှမများအားလုံး ကျေနပ်နိုင်ပါစေ။
ချစ်မကြီးမနှင်းရဲ့ ချစ်ခင်မှုတက်ဂ်ပိုစ့်လေးပါ။ Angel Shaper ရဲ့ မလှမပ၊ ကဗျာမဆန်တဲ့ နိစ္စဓူဝ အပိုင်းအစလေးတွေ တစ်ချို့ ဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။
အိပ်ယာနိုးတာက စရမှာလား၊ အိပ်ယာဝင်တာက စရမှာလား တောင်မသိတော့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ... အိပ်ယာထတာက စပြောရတာပေါ့။ အိပ်ယာကနိုးပြီး မျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့့ ကျမ်းစာဖတ်၊ ဆုတောင်းတယ်။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာလေးဖွင့်၊ သီချင်းလေးတွေ အရင်ဖွင့်၊ နားထောင်ရင်း တွေ့တဲ့လူကို လိုက်နှောင့်ယှက်တယ် အဲလေ.. လိုက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။။ "မောနင်းပါ" လို့။ အဲလို နှုတ်ဆက်လိုက်ရင် "ဘာခုမှ လာမောနင်းနေတာတုန်းးးးး ငါတို့က ရုံးဆင်းတော့မှာ" လို့ ပြန်နှုတ်ဆက်တတ်ကြတယ်လေ... ဟိဟိ။ ပြီးရင် ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း ကွန်ပျူတာရှေ့ပြန်ထိုင်တယ်။ ကွန်ပျူတာရှေ့ကနေ တအောင့်နေမှ ထပြီး တကိုယ်ရေသန့်ရှုင်းမှုကို စတင်တယ်။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာရှေ့ ပြန်ရောက်တာပဲ။ (ဟိဟိ.......... ကွန်ပျူတာရှေ့ကမခွာလို့ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်ကြီး မထင်ပါနဲ့ ) တွေ့ သမျှ သူငယ်ချင်း မောင်နှမတွေနဲ့ ချတ်တယ်။ ဆွေးနွေးတယ်၊ စနောက်တယ်။ ရန်ဖြစ်တယ်။ ငြင်းခုန်တယ်။ ပျော်စရာကြီးပါ.... အဲလောက် အွန်လိုင်းကို ခင်တွယ်ပါတယ်။ (သတိ။ မကြူရေးချ မကြူပါနော်။ မကျွမ်းကျင်လို့။ စိတ်မရှည်လို့)
ပြီးရင် ၅ကြိမ်ထက်မက ထမင်းစားဖို့ အော်ခေါ်နေတဲ့ အတူနေ အကို၊ အမတွေ ကို "လာပြီ၊ လာပြီ" ဆိုပြီး ခြေထောက်လေး အရင်လှုပ်ပြ၊ ပြီးရင် အမြီးလှုပ်...အဲ ဟုတ်ပါဘူးးးးးးး (အမြီးမှ မရှိတာကို..ဟိဟိ) ပြီးရင် ပါးစပ်က "လာနေပြီ လာနေပြီ" လို့ ထပ်အော်ရင်း လက်က သွက်လက်စွာ ရိုက်ရိုက်ရိုက်........ချတ်ချတ်ချတ်................... အကို၊ အမတွေရဲ့ အော်ခေါ်သံတွေ ကီး (Key) ပြောင်းလာပြီ၊ ကီး (Key) မြှင့်လာပြီဆိုရင်တော့ အပြေးဆင်းပြီး လိုက်စား။ ပြီးရင် အမတော် ဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်၊ ရေမိုးချိုးပြီး အလုပ်ကိုသွား။။။။။။
ဘတ်စ်ကားဂိတ်ထိ ၁၅မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ကားအလာကို တအောင့်လောက်စောင့်၊ ဘတ်စ်ကားကြီး စီးပြီး အလုပ်ကိုသွား။ အလုပ်ကိုရောက်တော့ တွေ့နေကျ ဒီရုပ်တွေကို တဟိုင်းဟိုင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက် ထပ်သောက်၊ အဝတ်အစားလဲပြီး အလုပ်စဝင်ရပါတော့တယ်။ အလုပ်စပြီဆိုရင်ပဲ ပြီကြီးငါး အစားများတဲ့ ပြီတီတီရုပ်တွေကို မနှစ်သက်ကြောင်း၊ စိတ်မဝင်စားကြောင်း မျက်လုံးပြူးပြ၊ မျက်ဆံပြူးပြပြီး သက်သေပြ၊ မျက်နှာပြောင်၊ ထိပ်ပြောင်နဲ့ "ဖုန်းနံပါတ်လာတောင်းပြီး၊ ညနေစာလိုက်ကျွေးမယ်၊ ရုပ်ရှင်အတူ ကြည့်ပါရစေ" ဆိုတာမျိုးကို စိတ်ညစ်ညူးစွာ ပြုံးပြပြီး "No, Thanks" လိုက်ရ၊ မျက်နှာချိုတဲ့သူတွေကို ပြန်ချိုပေး၊ သဘော ကောင်းတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေကို စလိုက်၊ နောက်လိုက်နဲ့ တပျော်တပါးကြီး လိုက်ကူညီပေး၊ တစ်ဆိုင်လုံးလာဖွတဲ့ သူတွေကို အနားသွားပြီး "ကူညီပါရစေ" သွားလုပ်၊ "ရတယ်၊ မလိုဘူး" လာပြောရင် စေတနာ ဗလပွနဲ့ "မဟုတ်ဘူး။ သင် ကျုပ်အကူအညီ လိုနေပါတယ်။ ကြည့်ပါလား....တစ်ဆိုင်လုံးပွနေပြီလေ" ဆိုမှ သူလိုချင်တာ မေးဖော်ရလို့ လိုက်ကူညီရ၊ အရေးထဲ လာရစ်တဲ့ သူရှိရင် မန်နေဂျာ ဟိုမှာရှိတယ် သွားပြောချေလို့ ချောက်တွန်း။ မန်နေဂျာနဲ့ ပြသနာဖြစ်တဲ့ တစ်ချို့ဈေးဝယ်သူတွေကို မန်နေဂျာက ကျွန်မမန်နေဂျာနဲ့သွားပြောပါလို့ ကိုယ့်ဆီ ပြန်ချောက်တွန်းရင် အဲဒီငရစ်တွေကို ကျေနပ်အောင် ပြုံးပြ၊ ဖြဲပြ (သွားဖြဲပြ)ပြီး ကျေနပ်အောင် လှည့်ပတ် ပြောပြ ရှင်းပြရ၊ အရေးထဲ ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ ကလေးတွေ အရမ်းဆော့လို့ တစ်ဆိုင်လုံး ဆူညံနေရင် အဲဒီကလေးတွေကို ပြုံးပြပြီး (မငိုလောက်အောင်) လက်ကောက်ဝတ်ကို ဆွဲညစ်လိုက်ရ၊ "ကစားကွင်းမဟုတ်ဘူး၊ အဆော့နဲ့" လို့ ဖြဲခြောက်လိုက်ရ၊ ဆိုင်မှာလူရှင်းရင် မြူးဇစ်အလိုက် ကလိုက်၊ ကွေးလိုက်၊ ခုန်လိုက်၊ ပေါက်လိုက်။ ဗိုက်ဆာရင် မန်နေဂျာမကို ဂျီကျလိုက်၊ ဆိုင်ပိတ်ချိန် မပြန်ချင်ပဲ အတင်းဝင်ချင်တဲ့ ဈေးဝယ်သူ တစ်ချို့ ကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့"ခု ဆိုင်ပိတ်ပါပြီ။ နက်ဖြန်မှ လာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" လို့ အနုနည်းနဲ့ မောင်းထုတ်။ အနုနည်းမရတဲ့ သူတွေကို ဗလ အားကိုးနဲ့ အကြမ်းနည်း သုံးပြီး ကြိမ်းမောင်းရင်း မောင်းထုတ်လိုက်ရ။ ပြီးရင် ဆိုင်သိမ်းလို့အိမ်ပြန်။။။။
အိမ်ရောက်တော့ စားစရာရှာစား။ လိုတရ ရေခဲသေတ္တာထဲက Juice ချိုချိုအေးအေး တစ်ခွက်နဲ့အမောဖြေ၊ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲ၊ ကွန်ပျူတာဖွင့် သီချင်းလေးနားထောင်ရင်းးးးးး အိမ်လည်ထွက်၊ ဂျီပုန်းတွေနဲ့ တွေ့ ရင် ခနလေးချတ်၊ ဘယ်ကဘယ်လိုရောက်ရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ အွန်လိုင်းသားကောင်ရှာနေတဲ့ မုဆိုးတွေနဲ့ တွေ့ရင်စိတ်ညစ်ညူးစွာ "ဖိတ်ခေါ်မှုကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် လိုင်းမတူ၍ စိတ်မကောင်း ပါကြောင်း" ပြောဆိုပြီး ငြင်းလွှတ်ရ၊ အိမ်လည်ထွက်(ဘလော့လည်ဖတ်)ရင်း လယ်ထဲသွားပြီး လယ်စိုက်၊ လယ်ရိတ်၊ လိုအပ်တဲ့ လယ်နီးချင်းတွေကို လိုက်ကူညီပေးးးးးးးးး
တစ်အောင့်နေ တစ်ယောက်ပြီး၊ တစ်ယောက် အွန်လိုင်းပေါ်တက်လာလို့ ရုံးတက်ကြပြီဆိုရင် စောနေပြီ (မိုးလင်းနေပြီ) ကိုယ်လဲ ဖြူစင်အပြစ်ကင်းတဲ့ အလုပ် စလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီး တွေ့ သမျှလူကို လိုက်မောနင်း၊ ဆုတောင်းပြီးရင် ဒုစရိုက်မပါတဲ့ အလုပ်စလုပ်။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ တစ်ခါတလေ သူ့ဟာသူ ဒုစရိုက်ပါပါ လာတာတော့ မတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းပေါ့) ဥပမာ.... သူများနဲ့ ညားသွားပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူဆုန်ဂျူး (Kwon Sang Woo) နဲ့ ရေခဲမုန့်လေး အတူတူစားရင်း Rock သီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ နားထောင်တာတို့၊ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သိပ်ရှုပ်တဲ့ Enrique Iglesias နဲ့အတူတူ သီချင်းတွေ ဆိုကြတာတို့၊ Rain ရဲ့ ပုခုံးလေး အဲ ပုခုံးကြီးကိုမှီ ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း Linking Park ရဲ့ New Divide သီချင်းလေး နားထောင်၊ အာ..... ထပ်မပြောချင်တော့ပါဘူးးးးးးးးးးးးးးး
ဒီလို...ဒီလို... ဒီလို....တွေနဲ့Angel Shaper ရဲ့ နိစ္စဓူဝလေးဟာ နေ့နဲ့ည မှားလောက်အောင် မလှမပနဲ့ပေါ့။ လှပဆန်းသစ်ပြီး အကျိုးရှိမဲ့ နိစ္စဓူဝလေးနဲ့ ဘဝသစ်တစ်ခု၊ ခြေလှမ်းသစ်လေးတွေနဲ့လျှောက်လှမ်းချင်မိပါရဲ့။ ဖြူစင်ရိုးသားမှုတွေကိုသာ အလေးထား မြတ်နိုးတတ်တဲ့၊ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ အပြုံးစစ်လေးတွေ ကိုသာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ Angel Shaper ရဲ့ အပြုံးတွေဟာ ခုတော့ ညစ်ညူးစရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပီပြင်နေသေးရဲ့လား မသေချာတော့ပါဘူးလေ။
ချစ်တဲ့ မနှင်း အမြန်ဆုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ လဲ ဒီတက်ဂ်ပိုစ့်လေးရေးပေးရင်း ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း မောင်နှမအားလုံး ပျော်စရာနိစ္စဓူဝလေးတွေကြား ပြုံးပျော်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ။
25.9.09 ( Fri;)
သူဟာ သာသနာအတွက်၊ သားသမီး၊ မြေးတွေအတွက်၊ အမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက်၊ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေ အတွက် စေတနာနဲ့ ကူညီလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူချစ်တဲ့ ဘုရားနဲ့ ဘုရားသားသမီးတွေအတွက် ဘုရားကျောင်းတစ်ဆောင် လိုအပ်မှုကြောင့် ခရီးဝေးသွားပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း အလှုငွေတွေ လိုက်လံကောက်ခံ ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှ သူ့ ကိုမခိုင်းပါဘူး၊ သူ့အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှလဲ သူမရသလို မမျှော်ကိုးခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားကျောင်းအသစ် ဖြစ်လာဖို့ သူကြိုးပမ်းပြီး ဒီဇိုင်းတွေဆွဲပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းပုံစံကို သူကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ လုပ်အားပေး လုပ်ရတော့လဲ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဦးဆောင်ပြီး သူ့အသက် သူ့အရွယ်နဲ့ မမျှတော့လောက်အောင် ကျင်းတွေတူးခဲ့တာတွေ၊ ဘုရားကျောင်းခြံတွေ ရှင်းခဲ့တာတွေ မှတ်မိ နေပါသေးတယ်။ နေပူကျဲတဲတဲထဲမှာ ဦးထုပ်လေး တစ်လုံးဆောင်းပြီး စက်ဘီးလေးတစ်စီးနဲ့ လိုအပ်တဲ့ သစ်တွေ တိုင်တွေကအစ လိုက်ပြီးစီမံခဲ့တာတွေ၊ သူ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကို ဘယ်သူမှ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေအတွက် ကောင်းကင်ဘုံမှာ သူရမဲ့ဆုသရဖူလေးဟာ ကြယ်ပွင့်လေးများစွာ လင်းလက်နေမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ်လေ။
မိသားစုအခြေအနေအရ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ခဲ့ရပဲ ၉နှစ်အရွယ်ကတည်းက အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အလုပ်တွေစလုပ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ ဘဝဟာ သူ့ ရဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ ကြိုးစားမှု၊ သူ့ရဲ့ဇွဲလုံ့လ တွေကြောင့် ကြီးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ သူမွေးတဲ့ သားသမီးတွေကို သူသိပ်လိုချင်၊ သိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ကောင်းပေ့ ဆိုတဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ကျူရှင်တွေ၊ ဘော်ဒါတွေမှာပို့ ခဲ့တယ်။ သူကြိုးစားပြီး ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးတွေကို သူ့ သားသမီးတွေ ပညာရေးအတွက်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သူကျေကျေနပ်နပ် ကြီးကို ပေးဆပ်ခဲ့တယ်။ သူ့ စေတနာကို နားမလည်တဲ့ သူ့သားသမီးတွေဟာ သူ့လိုထက်မြက်တဲ့ ဦးနှောက် လေးတွေ ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါလျက်နဲ့မကြိုးစားခဲ့ကြဘူး။ ပေါ့လျော့ခဲ့ကြတယ်။ သူဖြစ်စေချင်တဲ့ နေရာကို ရောက်အောင် မသွားနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ သူရစေချင်တဲ့အရာကို အရမယူနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ သူတို့ဘ၀တလျှောက်လုံး သူ့ ရဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမှု၊ ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့ပဲ အသက်ရှင်သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်နေခဲ့ကြ၍ များလားမသိပါဘူး။
သူဟာ တစ်ချိန်က သူ့ အမျိုးတွေထဲမှာ ပထမဦးဆုံး တိုက်အိမ်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကားတွေ အများကြီးပိုင်တဲ့သူ၊ အိမ်ခြံတွေ အများကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဆိုပြီး လူတွေလေးစားအားကျရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလို၊ အကူအညီ အမြဲတမ်းလိုအပ်နေတတ်တဲ့ သူ့အမျိုးတွေအတွက်သူဟာအားကိုးရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စေတနာ၊ မေတ္တာတွေကို နားမလည်တဲ့ သူ့ အမျိုးတွေကတော့ သူ့ကိုရက်ရက်စက်စက် လိမ်ခဲ့ကြတယ်၊ ညာခဲ့ ကြတယ်လေ။ သူသိခဲ့ပေမဲ့ ဘာအပြစ်မှ မယူရက်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ အပြောမချိုတဲ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သူ၊ စိတ်ဆတ်၊ စိတ်မရှည်တဲ့ ရိုးသားသူ၊ သဘောကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ Angel Shaper ရဲ့ ဟီးရိုးကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လမ်းပြရှင် မီးပြတိုက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကိုးရာလဲဖြစ်တယ်။ လိုအပ်မှုတိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ လိုတရ မီးခွက်လေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ကို ချစ်ခင်သူ သူ့ မိတ်ဆွေတွေက ဦးတင်ရွှေ လို့ ခေါ်ပြီး၊ သူ့အမျိုးတွေက ပါဆွမ်း (Pa Suan)၊ ပူဆွမ်း (Pu Suan) လို့ခေါ်တယ်။ သူ့ချစ်ဇနီးက (U ThangSuan) လို့ခေါ်ပြီး၊ သူ့သားသမီးတွေက (Pa) လို့ ခေါ်တယ်၊ သူ့မြေးတွေက (PU) လို့ခေါ်တဲ့ Angel Shaper ရဲ့ ချစ်လှစွာသော (Pu) အဘိုးဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ မကောင်းကြောင်းလေး တစ်ခုလောက်ထည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် သူက ကားမောင်းသိပ်မကျွမ်းပါဘူး။ လုံးဝ မမောင်းတတ်တဲ့သူနီးပါးကို မကျွမ်းကျင်တာပါ။ တစ်နေ့သူ ကားအရမ်းမောင်းချင်လို့ဖြစ်မယ် အိမ်သားတွေ မနိုးခင် အစောကြီးထ ကားကိုဂိုထောင်ထဲက ခပ်တည်တည် ထုတ်မောင်းပြီး ပြန်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ မိုးလင်းလို့ ကားထုတ်ကြတော့မှ ကားရှေ့နားလေး ပွန်းနေတာတွေ့ ကြတယ်။ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ လိုက်မေးနေကြပေမယ့် တစ်အိမ်လုံးသိပါတယ်။ သူနဲ့အတူအိပ်တဲ့ Angel Shaper ဆို သိပ်သိတာပေါ့။ သူရှက်မှာစိုးလို့မပြောကြတာပါ။ ကြိတ်ကြိတ်နဲ့တော့ ပြုံးကြတာပါပဲလေ။ သူ့ မှုာ အဲလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးတွေလဲရှိပါတယ်။
Angel Shaper ငယ်ငယ်တုန်းကဆို သူ့ နာမည်ပြောလိုက် စားချင်တာ အကုန်စားရတယ်။ အကုန် အဆင်ပြေ ခဲ့တာလေ။ ရေခဲမုန့်သိပ်ကြိုက်တဲ့ Angel Shaper တို့ အိမ်ရှေ့ မှာ စိန်ဂေါ်လီ ဆိုတဲ့ အအေးဆိုင်ကြီးရှိတယ်။ ရေခဲစက်ကြီး နဲ့ကို ဖွင့်ထားတာပါ။ ရေခဲမုန့်စားချင်လာရင် Angel Shaper ဘာသွားလုပ်တယ် ထင်ပါသလဲ? ရေခဲစက်ထဲ သွားပြီး အဲဒီက ရေခဲမုန့်တွေ၊ ရေခဲချောင်းတွေ လုပ်တဲ့ ဦးလှထွန်းကို " ဦးလှထွန်း၊ ဦးလှထွန်း ကျွန်တော့်အဖိုးက ရေခဲမုန့် နှစ်ခု ယူခိုင်းတယ်ဗျ " ဆိုရင်ဟိုက ဘာရယ်မဟုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လေ။ အဲလို...စားချင်တိုင်း အဘိုးနာမည်ပြောလိုက် စားရပါတယ်။ မယုံမရှိနဲ့နော်။
Angel Shaper ဝက်သားပြုပ်ချိုဆိုတာလဲ သိပ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သိန်းရွှေ ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်က မန်နေဂျာ စားဖိုမှုးကို "ဦးဘပု၊ ဦးဘပု ကျွန်တော့်အဘိုးက ဝက်သားပြုပ်ချိုတစ်ပွဲ တဲ့ဗျ" ဆိုရင် မြန်မြန်လုပ်ပေးရရှာပါတယ်။ အဲလိုပါပဲ တစ်ရပ်ကွက်လုံးမှာ လိုချင်တာ၊ စားချင်တာ၊ လုပ်ချင်တာ သူ့နာမည်တပ်ပြီး ပွေလီခဲ့တာပါ။ အိမ်လာပြီး ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီဖိုးတွေလာရှင်းရင်တော့ အဖိုးမှာ ဖြေရှင်းရတော့တာပေါ့နော်။ ငါမယူပါဘူးလို့ သူငြင်းရင်... တစ်ဖက်ကလဲ ဟိုတစ်နေ့က ဦးတင်ရွှေမြေးကြီးလာယူတာလေ ဆိုရင် သူ့မှာပါးစပ်ပိတ်ပြီးအံ့သြနေရတယ်လေ။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာတစ်ခုက နောက်တစ်ခါ သူလာယူရင် မပေးပါနဲ့လို့ သူဘယ်တော့မှ မပြောခဲ့တာကိုပါ။
အိမ်ခွဲသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေ ဆီလဲ တစ်ခါတခါ စိတ်ကူးရရင် သွားပြီး ဒီနေ့ အဘိုးက ထမင်း အတူတူ စားဖို့ ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ဆိုပြီး သွားခေါ်တတ်တယ်။ တစ်ခါဆို ကြီးတော်က အလုပ်များနေတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ "ဟုတ်လား အတော်ပဲ ငါမအားဘူး။ ဘာမှ မချက်နိုင်ဘူး။ နင့်ဒေါ်လေးတွေ နဲ့ အမေချက်မယ် မို့လား။ ငါပြီးမှလာခဲ့မယ်နော်" ဆိုပြီး စားခါနီးညနေစောင်းမှ မိသားစုချီတက်လာလို့ကတော့ အိမ်မှာစားစရာ ဘာမှ မရှိတတ်ပါဘူး။ သူတို့ က ဘာလို့ယုံတာလဲဆိုရင်၊ အိမ်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနီးပါး မိသားစုစုံ ထမင်းဟင်း ချက်စားလေ့ရှိတာကိုး။ အဘွားနဲ့အမေကတော့ မိန်းမသားပီသစွာ ခုဘာကျွေးမလဲ။ ဘာညာနဲ့ဆူတတ် ကြပါတယ်။ အဘိုးကတော့ သူ့မြေးကို ဘာမှပြောမနေ။ ဆူမနေတော့ပါဘူး။ သိန်းရွှေတို့၊ မိသားစု တို့၊ နောင်နောင် ထမင်းဆိုင်တို့မှာ ထမင်းဟင်းတွေ ပြေးဝယ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ အဲလိုလေးတွေကအစ သူ့မြေး ဘာလုပ်လုပ် ဖြေရှင်းပေးတတ်ခဲ့တာပေါ့။
သူက သူ့သားသမီးတွေကမွေးတဲ့ သူ့မြေးစုတ်လေးတွေကိုသာ ချစ်တာ။ အိမ်မှာကလေးတွေ စုပြုံနေရင် မကြိုက်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာက တီဗွီရှိတဲ့ အိမ်တိုင်းမှာ ညတိုင်း ကလေးတွေ ပြုံတာကိုး။ ဒီတော့ တီဗွီ မ၀ယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Angel Shaper တို့မောင်နှမတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက သူများအိမ်မှာ တီဗွီလိုက်ကြည့်ခဲ့ ရပါတယ်။ သူမကြိုက်တော့ကိုယ်ကလဲ မပူဆာမိပါဘူး။ ပူဆာရကောင်းမှန်းလဲမသိခဲ့ဘူးလေ။ အဲ..ကာရာအိုကေ ဆိုတဲ့ ဗီစီဒီစက်ကြီးတွေပေါ်လာတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကအဆိုတော် ရူးရူးတဲ့ Angel Shaper အငြိမ်မနေနိုင် တော့ပါဘူး။ ရသမျှ မုန့်ဖိုးတဝက်ဟာ သီချင်းခွေဖိုး။ ကာရာအိုကေဖိုးနဲ့ ကုန်နေတာကိုး။ တီဗွီဝယ်ပေးးးးးးးးးးး ဝယ်ပေး.... ဗြဲ...အီးးးးဟီးးးးး ဆိုပြီး ငိုယိုပါတယ်။ အစာငတ်ခံပြီး တစ်ရက်ဆန္ဒပြလိုက်တာ မြေးချစ်တဲ့အဘိုး မခံနိုင်ဘူးလေ။ သူ့မြေးကြီးကိုသနားတော့လဲ ဝယ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကစ မီးလာရင်တီဗွီရှေ့က မခွာတော့ပဲ အသံပြဲကြီးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေး အမြဲတမ်းသောင်းကျန်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကို ဆူညံသံတွေ မနှစ်သက်တဲ့ အဘိုးက သူချစ်တဲ့ သူ့မြေးရဲ့ သောင်းကျန်းတဲ့ ဒဏ်မို့ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှမပြောခဲ့ရှာပါဘူး။
ဆိုင်ကယ်တွေ အမောင်းကြမ်းတဲ့ Angel Shaper ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရခင်ကပေါ့ မော်တော်ပီကယ်တွေက ဖမ်းလို့၊ ဆီးလို့ရှိရင် ဦးတင်ရွှေမြေးဗျ လို့ ပြောလိုက်၊ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မသိတဲ့ မော်တော်ပီကယ်တွေကို "ကျွန်တော်တို့အိမ်လာပြီး ဆီလာထည့်ရင် ပိုက်ဆံတောင် ပြည့်အောင်မပေးပဲနဲ့၊ အကြွေးတွေလဲ လာထည့်သေးတယ်" ဘာညာ လူကြားသူကြား ပြန်ပြီးရန်စွာတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို အဘိုးဆီမှာ ပြန်တိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ဦးတင်ရွှေမြေးက တော်တော်စွာတယ်တဲ့။ အိမ်မှာ အရင်တုန်းက လောင်စာဆီ ရောင်းဝယ်ရေးလဲ လုပ်ခဲ့တာလေ။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းတွေမှာ Angel Shaper ဆိုတဲ့ ကလေးဆိုးရှိရင် ဆီကို အကြွေးတောင် သိပ်မယူရဲသလိုပဲ။ ကိုယ့်ကိုဆို ကလေးမြို့ က ဘဲဥတွေ နောက်တစ်ခါ ဖမ်းလဲမဖမ်းရဲ တော့ပါဘူး။
ကျောင်းတက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကြား မျက်နှာမငယ်ရအောင် မုန့်ဖိုးများများပေးတတ်ခဲ့တာတွေ၊ အောင်စာရင်း ထွက်တဲ့မနက်ခင်းတွေမှာ ကိုယ်တွေမနိုးခင် သူ့မြေးတွေ စားချင်တဲ့ ပဲအီကြာကွေး၊ ပဲပလာတာ၊ စတဲ့ မနက်စာ စားစရာတွေ အများကြီးဝယ်လာတတ်ပြီး မိသားစုမနက်စာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီး သုံးဆောင်ခဲ့ရတာတွေဟာလဲ မမေ့နိုင်စရာပါ။
အိန္ဒိယကျောင်းသွားတက်တုန်းက အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တဲ့ တစ်ရက်မှာပေါ့... ဖုန်းလိုင်းမကောင်းလို့ ဖုန်းက ဘာမှ မပြောလိုက်ရပဲ ကျသွားပါတယ်။ လာကိုင်တာက အဘိုးပေါ့။ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ခေါ်ပေမယ့်မရတော့ပါဘူး။ စိတ်မရှည်လို့ အဲဒီနေ့ ပြန်မခေါ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဘိုးက သူ့မြေးခေါ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ညလုံး ထိုင်စောင့် နေပါသတဲ့။ စဉ်းစားရင်း အဘိုးကို သနားလွန်းလို့ စိတ်မရှည်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိပါတယ်။ ကျောင်းပိတ် ပြန်လာတော့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လမ်းခရီးဖြောင့်ဖြူးလို့ပုံမှန်ရောက်မဲ့ ရက်ထက် တစ်ရက်စောတာနဲ့ပဲ အိမ်ကို Surprise လုပ်နေကျ ကိုယ်က ဒီတစ်ခါလဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းမဆက် အကြောင်းမကြားခဲ့ပါဘူး။ အိမ်သားတွေအားလုံးက နောက်တစ်ရက်ရောက်မယ်လို့ ပြောနေကြပေမယ့် သူက မဟုတ်ဘူး ငါ့မြေးဒီနေ့ ရောက်မှာလို့ အတတ်ပြောနိုင်တာ။ အဲလိုလေးတွေကအစ သူ့စိတ်က အလိုလိုကို သိနေတာတွေဟာ ဆန်းကြယ်တဲ့ သူ့ ရဲ့ မေတ္တာ တန်ခိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်လဲ တကယ်ရောက်ရော နေမကောင်းလို့ပိန်နေတဲ့ အဘိုးက...... ကဲ ငါမပြောဘူးလားဆိုပြီး ပြုံးလို့ရွှင်လို့။ အိမ်သားတွေအားလုံးမှာ တအံ့သြနဲ့ပေါ့။
သူနေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်ဖို့ ဆေးရုံမှာ Register လုပ်တာ အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရဖူးတယ်။ သူက ပြောတယ် " ငါက ငါ့သားသမီးတွေ င့ါမြေးတွေကို ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာ ဒီလို ဒုက္ခတွေ ရှိတတ်လို့ပေ့ါ၊ တစ်ယောက်ယောက်သာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဘယ်သူရဲ့ အဖေ၊အဘိုး ဆိုပြီး ဦးစားပေးခံရမယ်။ ပိုအဆင်ပြေမယ်လေ" လို့ တသသပြောနေတတ်တယ်။ ကိုယ်ကလဲ အကျင့်အတိုင်းပဲ "အဘိုးရေ ဘာမှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်။ အဘိုးမြေး ဆရာဝန်ဖြစ်မလာပေမယ့် အဘိုးကို မြေးဆရာဝန်ရအောင် လုပ်ပေးမယ်လေ....သိလား.... ဆရာဝန်တစ်ယောက် ယူလိုက်မယ်လေ၊ ဟိဟိ " လို့ရွှတ်နောက်နောက် နဲ့ သူ့ ခံစားချက်တွေ ပြေပျောက်အောင် အဲလိုဖျောင်းဖျခဲ့ဖူးတယ်။
သူအားငယ် စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာစိုးလို့ ရယ်စရာတွေ ဘေးနားထိုင်ပြောတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို "ရယ်ရတာ ဗိုက်တောင် နာလာပြီ။ မပြောနဲ့တော့ ရယ်အောင်ထပ်မလုပ်နဲ့တော့ မောတယ် " ဆိုပြီး မျက်ရည်ဝဲ လောက်အောင် ရယ်မောခဲ့တဲ့ သူ့ မျက်နှာလေးကို ခုထိမြင်ယောင်မိပါတယ်။
သူနေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဝေဒနာခံစားနေရချိန် စိတ်ပူနေကြတဲ့သူ့မိသားစုကို သူကတောင် ပြန်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ ပါသေးတယ်။ "ငါ အားလုံးရဲ့ လက်ကိုကိုင်ပြီး နှုတ်မဆက်ပဲ ဒီလောကကနေ ထွက်ခွာမသွားပါဘူး၊ စိတ်မပူကြပါနဲ့ " လို့ ဂတိစကားဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင်း သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး ထွက်သက်လေးမှာ သူချစ်တဲ့ ဇနီးနဲ့ သူ့သားသမီးမြေးတွေ အားလုံးကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်နာမည်ခေါ်ပြီး လက်လေးကမ်းပေးခဲ့တယ်။ မသိနားမလည်တဲ့ ကိုယ်တို့တွေက ဘာလိုချင်တာလဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ ဆိုပြီး သူကမ်းပေးတဲ့လက်ကို ဆုတ်နယ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ အားလုံးရဲ့ လက်ကိုသူ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးမှ သူ့ရဲ့အသက်ရှုသံ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ တကယ့်ကို ဖြေးညင်းစွာ သူအားလုံးကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာပါ။ Angel Shaper တို့ ခရစ်ယာန် သဂြိုင်းတွေက လက်ဝါးကပ်တိုင် ပုံလေးတွေပေါ်မှာ RIP လို့ ရေးထားတဲ့စာသား ရောက်ဖူးသူ၊ မြင်ဖူးသူတွေ သတိထားမိမလား မသိဘူး။ အဲဒီ RIP က Rest In Peace လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ အဖိုးလည်း တကယ့်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူသွားခဲ့တာပါ။
သူတစ်ယောက်တည်းက ဒီအခြေအနေ၊ ဒီအရွယ်ထိ ပြည့်စုံစွာ သူ့သားသမီး ၇နှစ်ယောက်။ မြေး ၉ယောက်ကို ရှာကျွေးခဲ့၊ ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့သားသမီးမြေးတွေအားလုံးက သူ့တစ်ယောက်တည်းကို စိတ်ချမ်းသာစွာ၊ ပြည့်စုံစွာ ထားနိုင်ခဲ့ကြဖို့နေနေသာသာ စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်မိခဲ့ကြတာတွေ ပိုမယ်ထင်ပါတယ်။ နောင်တဆိုတာ နောင်မှ တတဲ့အရာမှန်း ကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့ပါပြီ။
ခုချိန်မှာ မြေးဦး တစ်ယောက်၊ သမီးကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရခဲ့တဲ့ မေတ္တာ၊ အကြင်နာနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင် ပေးမှုတွေ၊ ဒီအရွယ်အခြေအနေထိရောက်အောင် တွန်းပို့ ခဲ့မှုတွေအတွက် မြူမှုန်လေး တစ်မှုန်စာတောင် ပြန်မလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောင်တ ရရုံ။ အပြစ်တင်ရုံ။ အားမလိုအားမရဖြစ်နေရုံက လွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ အဘွားနဲ့အဖေ၊ အမေ၊ ဦးလေး၊ အဒေါ်တွေကို သမီး အားလုံးအတွက် ကြိုးစားနေပါပြီ။ သမီးပြန်ပြီးလုပ်ကျွေးနိုင်ဖို့ အသက်ရှည်အောင် ကျန်းမာအောင်သာ ကြိုးစားပြီး ဆုတောင်းပေးကြပါ၊ ကောင်းကြီးပေးကြပါ " လို့သာ ဂတိပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ဖြစ်ချင်တဲ့ အနေအထား မရောက်နိုင်သေးတာ၊ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတာတွေဟာ ကိုယ်ညံ့လို့ဖျင်းလို့လား ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေး သေးတာလား မဝေခွဲ မစဉ်းစား တတ်တော့ပါဘူးလေ။
စုန်ရေနဲ့ဆန်ရေအကြောင်း အကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ခါ ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို သိပ်ချစ်ကြတယ်။ လုပ်ကျွေးခဲ့ကြတယ်။ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲလိုပါပဲ သားသမီးတွေကလဲ မိဘချစ်သလောက် ပြန်မချစ်နိုင်ရင်တောင် ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အားလုံးက ကိုယ့်မိဘကို ကိုယ်ချစ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေက ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ကြတယ်။ အဆင်မပြေလို့ ဆိုပြီး ဘယ်မိဘမှ ကိုယ့်သားသမီးကို အငတ်တော့မထားခဲ့ကြပါဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ သားသမီး လိုအပ်ချက်တွေကို သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတယ်လေ။ ကိုယ်တို့ သားသမီးတွေကျတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက တွေးဖူးကြတာပဲလေ။ မိဘကိုပြန်လုပ်ကျွေးမယ် တဲ့။ ဘယ်တော့လဲ? ကြီးလာရင်ပေါ့။ နည်းနည်းကြီးလာရင်တော့ တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့။ ခုကြိုးစားမလို့။ ကြိုးစားနေတုန်း၊ လုပ်တုန်း တဲ့။ ဆင်ခြေတွေ အများကြီးပေးပြီး မိဘကို လုပ်ကျွေးဖို့ အချိန်တွေဖြုန်းတီးမိခဲ့ကြတယ်နော်။ အင်းးးးးးးးး Angel Shaper တွေးမိတယ်... မိဘတွေကလဲ သားသမီးတွေလိုပဲ တစ်ချိန်ကျမှ၊ အဆင်ပြေမှသာ ကျွေးမွေးပြုစု ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် တို့တတွေ လူတစ်လုံး၊ သူတစ်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား လို့ပါ။
ဒီတော့အဘိုးရေ..... သမီးတို့လိုသာ အဘိုးတစ်ချိန်ကျမှ ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့မယ်ဆိုရင် သမီးတို့တွေ ဒီလို လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပါ အဘိုးလို့ ပါးစပ်လေးနဲ့ ပြောလိုက်ရုံလေးနဲ့ မလုံလောက်နိုင်မှန်း သိသိကြီးနဲ့ပဲ အဘိုးကိုကျေးဇူးတင်သလို သိပ်လဲလွမ်းမိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရင်ခွင်တော်ထဲကနေ သမီးတို့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာ ပြုံးနေနိုင်ရဲ့လား။ စိတ်ပူနေတုန်းပဲလား။ အဘိုးပြုံးရွှင်စွာ ကြည့်နေနိုင်ဖို့ သမီးတို့ ချစ်ခင်စွာနဲ့ ကြိုးစားနေပါ့မယ်နော်။ အဘိုးနဲ့အတူ ပြန်ဆုံပြီး သခင်ယေရှုရဲ့ ရင်ခွင်တော်မှာ ကျေးဇူးတော် အတူချီးမွမ်းမဲ့နေ့ရက်လေး မချင့်မရဲ လိုချင်တမ်းတနေမိပါပြီလေ။
(ချစ်သောအဖိုး ထာဝရအိမ်တော်ပြန်သွားတာ ၃နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့၊ သတိရအောက်မေ့ခြင်း အမှတ်တရ ပိုစ့်လေးပါ။)
21.9.09 ( Mon; )
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ကိုအမြင်ကတ်စေသော အကြောင်းရင်း တချို့ 
ကျွန်ုပ်ကို အမြင်ကတ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းများတဲ့ ဝက်ကလေးကအမြင်ကတ်စွာ အဲလေ ချစ်ခင်စွာတက်ဂ်လိုက် ပါတယ်။ ဘယ်လိုစရေးရမလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားတာ ဦးနှောက်တောင် ခြောက်လာပါတယ်။ သိတယ်မို့လား။ Angel Shaper က ငယ်ငယ်ကတည်းက အချစ်ခံခဲ့ရတာလေ။ လူချစ်လူခင်ပေါတယ်။ ဟဲဟဲ (ဒီလိုပြောလိုက်လို့ အမြင်ကတ်လာကြပြီမို့လား) ဟိဟိ...... ဒီလိုပြောတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကလဲ ကိုယ့်ကို အမြင်ကတ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်မယ်။ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အမြင်ကတ်စရာအကျင့်လေးတွေ ပြောပြ ရဦးမှာပေါ့လေ။ ဝက်လုပ်မှပဲ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း နေရပါပြီ။ ဟူးးးးးး
ဟိုးးးးးငယ်ငယ်ကတည်းကစလို့ခုချိန်ထိ အကြီးတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ယူ ဆိုးနွဲ့ဂျီကျ တတ်ပြီး၊ အငယ်တွေအပေါ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ တတ်တဲ့ အကျင့်တွေလဲ ပါမယ်ထင်တာပဲ။ အိမ်မှာ မောင်နှမတွေ စားသောက်ကြပြီဆိုရင် အကြီးဆုံးအခြမ်းကိုမှ လိုချင်တဲ့၊ မုန့်ကို တစ်ယောက်နှစ်ခုဝေရင် ကိုယ်က သုံးခုရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေ ဟာလဲ မသိတတ်သေးတဲ့ အရွယ်ဖြစ်လင့်ကစား မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်တွေအတွက် တော်တော်အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းခဲ့မယ်ထင်တယ်။
ကျောင်းတက်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြန်တော့လဲ အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းတွေ အမြင်ကတ်လောက်အောင် အဆော့သန်ပြီး၊ နေရာတကာ ဗိုလ်ကျတတ်တဲ့အကျင့်တွေလဲ ပါနိုင်တယ်။ ရွယ်တူ ကောင်မလေးတွေမပြောနဲ့ ကောင်လေးတွေတောင် ငိုအောင်လိုက်စ၊ သကြားလုံးတွေကျွေးပြီး ပြန်ချော့တတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေလဲ ပါလိမ့်ဦးမယ်။
လမ်းထဲက တရုတ်ကျောင်းဆရာ ခပ်နွဲ့နွဲ့လေး တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ က ဖြတ်လျှောက်တော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဦးချန်ချန် အခြောက်လို့ အော်ပြီး ပုန်းခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။ သူတော်တော်ဒေါသထွက်တာလေ အိမ်ထဲထိ လိုက်ရှာတယ်။ ဟိဟိ.... အရပ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့စကားကော၊ အပြုံးကော ချွေတာတဲ့ ဦးတင်လှိုင် ဆိုတဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ဖြတ်လျှောက်လာတော့ ဘယ်လိုပြောတယ်ထင်လဲ"ဟာ...မြေကြီးတွေတောင် တုန်ခါနေပါတယ်။ ငလျင်များလှုပ်တာလားလို့ ဦးတင်လှိုင်ကြီး လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာကိုးးးးးးး ဗျ " ဆိုတော့ သူ့ မှာ အောင့်သက်သက်နဲ့ပြုံးခဲ့ပေမယ့် စိတ်ထဲကတော်တော် အမြင်ကတ်နေမယ်ဆိုတာ မပြောပဲလဲ သိမှာပါ။
အဲလို လူကြီးသူမ မရှောင် စနောက်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေဟာလဲ ကိုယ့်ကို အမြင်ကတ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေပဲပေါ့။
ရည်းစားပေါတဲ့ ကိုကြံကြီး (နာမည်ပြောင်ပါ) ကတော့ သူ့ ရည်းစားတွေနဲ့ ချိန်းတွေ့ တိုင်း Angel Shaper ရဲ့ နှောက်ယှက်ခြင်းက မလွတ်နိုင်တာ သူ ညံ့တာပဲမို့သူပဲခံနေရတာဟာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကတ်စရာ အကျင့်တွေ ပါပဲလို့ ပြောချင်ကြသေးလား။ ရပ်ကွက်ထဲက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးရဲ့ အားနည်းချက်မှန်သမျှ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် ပီသစွာ ကြီးမှ ပြန်ပြန်ဖော်တတ်တဲ့ ကောင်းမှုတွေကြောင့် သူတို့ ရဲ့ မုန့်ဖိုးတစ်ဝက်ဟာ
ကိုယ့်မုန့် ဖိုး ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာလဲ အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းမလားပဲနော်။ အဟဲ
ရပ်ကွက်ထဲက စားစရာ အပင်တွေ အများကြီး၊ ပန်းပင်တွေအများကြီး စိုက်ထားတဲ့ အပျိုကြီး ညီအမတွေရဲ့ ခြံထဲ သစ်သီးတွေ ဝင်ဝင်ခိုးတာ၊ သူတို့ ပန်းတွေ ခိုးပြီး ဆရာမတွေကို လိုက်လိုက်ပေးတတ်တာ၊ သူတို့မွေးထားတဲ့ ခွေးကောင်ကြီးတွေကို ကြောက်လဲကြောက် မုန်းလဲ မုန်းလို့ခဲနဲ့ ပေါက်ပြီး လိုက်စတတ်တာတွေ ကိုယ့်အတွက် ပျော်စရာကောင်းပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့ အမြင်ကတ်စရာကောင်းနေမှာပဲနော်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတည့်တဲ့ ခပ်စွာစွာ အန်တီကြီးရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူကဖျားလို့ အိမ်ထဲမှာ ယဲ့ယဲ့လေး ထိုင်နေရှာတယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ရန်မစွာနိုင်ရှာဘူးလေ။ ကိုယ်ကလဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် စေတနာသွားပိုမိပါတယ်။ "အန်တီမျိုးးးးး နေမကောင်းဘူးလားဟင်။ ဘာဖြစ်တာလဲ" "ဖျားနေတာ ကလေးရယ်၊ လူကြီးရောဂါပေါ့" "ဟုတ်လား၊ ဆေး မသောက်ဘူးလားဟင်" "သောက်တာပါပဲကွယ်။ မသက်သာဘူးလေ" "အင်း မြန်မြန်ကောင်းချင်ရင်လေ ဆေးတစ်မျိုးဝယ်သောက်လိုက်၊ ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ ဆေးထုပ်ကသေးသေးလေး ကြွက်ပုံလေးပါတယ် သိလား၊ အဲဒါလေး မြန်မြန်ဝယ်သောက်လိုက် အန်တီမျိုး။ ချက်ချင်းပျောက်မယ် အသက်" လို့ပြောပြီး ပြေးသွားတဲ့ ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက်အမြင်ကတ်လဲ မသိပါဘူး။ နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲ အိမ်ကို ချက်ချင်းရောက်လာပြီး အဖေတို့ ကိုတိုင်တယ်လေ။ ဟီးးဟီးးးးးး
သူခိုးပွဲဆိုတဲ့ ညရောက်ရင် သိပ်ပျော်ခဲ့ရတယ်။ ကလေးတန်မဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြောင်းချိတ်လိုပြောင်း (ဥပမာ။။။ နေရာသစ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ မှာ ဆေးဆိုင်က ဆီးချို၊ သွေးချို ဆေးကြော်ငြာဘုတ် သွားထောင်ထားတာမျိုး၊ ဘေးအိမ်က တရားသူကြီးဆိုသူလူကြီးရဲ့ အိမ်ရှေ့ မှာ ဝက်သားဆိုင်က အလေးခိုးမရောင်းပါဆိုတဲ့ ချိန်ခွင်ကို အတည့်ပုံဆွဲပြီး တင်ထားတဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းကို သွားချထားတာမျိုးးးးး၊ သားဖွားဆရာမဒေါ်သီတာအိမ်ရှေ့ မှာ မိတ္တူဆိုင်က ချုံ့ ၊ချဲ့ အမြန် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို သွားချထားတာမျိုး၊ ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းတွေရှေ့အသုဘ ကြော်ငြာဘုတ် သွားချထားသလိုမျိုး...... )၊ သူများ ကြက်လေးတွေ၊ ဘဲလေးတွေကို လေးဂွနဲ့ လိုက်ပစ်လိုပစ်၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် ရပ်ကွက်ထဲမှာ Angel Shaper နဲ့ ရွယ်တူကလေးတွေ ပျော်ခဲ့ကြ ပေမယ့်၊ ဘယ်သူ့ လက်ချက်ဆိုတာ မပြောပဲသိနေသလို၊ ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာမှန်သမျှကို စိတ်ရှည်တဲ့ အဘိုးနဲ့ အမေက မနက်ကျရင် ပြန်ဖြေရှင်းရနဲ့အမြင်ကတ်စရာကောင်းလောက်အောင် ကဲခဲ့ဖူးပါရဲ့။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မရှိရင်ရပ်ကွက်ထဲမှာ ခြောက်ကပ်နေတယ်ဆိုတာ၊ သူတို့တွေအပါအဝင် ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီလို အပေအတေလေးကို သတိရနေတတ်တယ်၊ တောင့်တနေတတ်တယ် ဆိုတာတွေ ကတော့ အိမ်ကလူတွေကို "သမီးကြီးပျောက်နေတယ်၊ ဘယ်သွားတာလဲ" လို့ လိုက်မေးနေကြတာတွေက သက်သေထူတာပဲလေ။ ကိုယ်လဲ သူတို့အားလုံးကို သတိရနေပါတယ်လေ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အင်အား ချွေတာပြီး အပြောနဲ့ ပဲ အလုပ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်မှာ အဲလိုအကျင့်လေးတွေရှိတာတောင် အပေါင်းအသင်း သိပ်ပေါနေတာကို အဖေက " ပါးစပ်မပါရင် ကျီးကန်းဆွဲလိမ့်မယ် " ဆိုပြီး... ကွန်မန့်ပေးခဲ့ဖူးတယ်လေ။
"ငါ့အကျီ င်္က ဘာတံဆိပ်၊ ဘယ်လောက်ပေးရတာ" လို့လာကြွားရင် " ငါက အဝတ်အစား သိပ်စိတ်မဝင်စားဖူး။ အိမ်က ဝယ်ပေးလို့ ဝတ်ခိုင်းလို့ မဟုတ်ရင် သိပ်ဝတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး" လို့ပြန်ဖဲ့တတ်ခဲ့တယ်။ "ငါအခု လိမ်းထားတာ ကိုးရီးယားမိတ်၊ ငါ့နှုတ်ခမ်းနီက နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်၊ ငါ့မိတ်ကပ်လေးက ဘာတံဆိပ် မိတ်ကပ်တွေထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံး" ဆိုတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ကြွားဝါမှုမျိုးတွေ လာပြောတတ်တဲ့ သူတွေကိုတော့ "ငါကတော့ ဘာမှမလိမ်းချင်ဘူး။ ရွှံ့လူးပြီးနေတာ။ င့ါညီမလေး တစ်ခါတလေ မနေနိုင်လို့သွေးပေးတဲ့ သနပ်ခါးကို စိတ်ပါရင် လိမ်းတတ်တာကလွဲလို့ င့ါမျက်နှာကို သဘာဝအတိုင်းပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတာ။ အပူတွေပေးမတင်ဘူး" လို့ပြောပြီး၊ အရူးကွက်နင်း အနိုင်ယူတတ်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့်တွေကို တော်တော်လေး အမြင်ကတ်နေကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဟိုးးးးးးတစ်ခါက မြန်မာမမလေး တစ်ယောက်နဲ့ကိုကိုကုလား စုံတွဲ တစ်တွဲ ဆိုင်ကိုဈေးလာဝယ်တုန်းကပေါ့။ မမက ဂျင်းဘောင်းဘီလိုချင်လို့ လိုက်ရှာပေးရင်းနဲ့စကားပြောဖြစ်တော့ "ညီမလေးက မြန်မာလား" တဲ့။ " အယ် ဟုတ်။ အမက မြန်မာလား။ သိပါဘူး အမက ကုလားကြီးနဲ့ တွဲလာလို့ သမီးက ဖားလို့ ထင်နေတာ" ဆိုပြီး ပြောမိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကို အပြောမတတ်လို့ ဆိုပြီး အမြင်ကတ်မိမှာပါပဲလေ။
ဆက်မပြောချင်တော့ဘူး။ ဒါတောင် အကင်းပဲရှိသေးတယ်။ အကုန်ရေးပြလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ငယ်ငယ်ကမှတ်မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေပဲ ရေးပြထားတာနော်။ အဟဲ.. အဲလောက် လူချစ်လူခင်ပေါတာလေ။ နောက်ဆို Angel Shaper ဘလော့ကို လာမလည်နိုင်၊ မခေါ်နိုင်၊ မပြောနိုင်ဖြစ်ကုန်မှာ စိုးတယ်။ ကြာရင် Angel Shaper ကို ပိုပို အချစ်တိုးလာကြမှာစိုးတယ်။ ဟိဟိ
ကဲ.... ဝက်ကလေးရေ... ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကို အမြင်ကတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချို့ မပြည့်မစုံရေးခဲ့တယ်ဟေ့။
ဟက်ပီဘတ်ဒေးနော်။မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ ဘာမှရေးမပေးနိုင်လို့ခုတက်ဂ်ပိုစ့်လေး ရေးပေးလိုက်တယ်။ ကျေနပ်နိုင်ပါစေကွယ်။
မကြီးနှင်းနဲ့ကိုဇောင်းကြီး တက်ဂ်လဲ မမေ့ပါဘူးနော်။ မကြာမီ လာမည် မျှော်ပေါ့။ ဟဲဟဲ။။။
18.9.09 ( Fri;)
ပထမဆုံး Angel Shaper လုပ်တဲ့ အလုပ်က စပြောရမယ်ဆိုရင် ဖက်ရှင် အင်္ကျီဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အရောင်းစာရေးပေါ့။ ဒီနေ့ သောကြာနေ့ဆိုတော့ ဈေးဝယ်နဲနဲ များပါတယ်။ အလုပ်လဲ နဲနဲ ရှုပ်တယ်။ ဝန်ထမ်းလဲ သိပ်မလောက်တော့ နဲနဲပင်ပန်းတာပေါ့လေ။ အဲလို အလုပ်များနေတဲ့ကြားထဲက တတ်နိုင်သလောက် ဈေးဝယ် သူတွေကို လိုက်ကူညီပေးနေရပါတယ်။ ရှုပ်နေတာတွေ ရှင်းရင်းနဲ့ Local ဈေးဝယ်သူနှစ်ယောက် ဂျင်းဘောင်းဘီ လိုက်ဖွနေတာတွေ့တော့ သူတို့ဆီသွားပြီး ဘာကူညီရမလဲ မေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က သူ့ဆိုဒ်လိုချင် တယ်လို့ပြောပါတယ်။ တို့လဲ သူ့ဆိုဒ်က ဘာဆိုဒ်လဲ ပြန်မေးတာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ သူ့ဆိုဒ် လိုက်ရှာပေးတယ် ဆိုပါ တော့။ တို့ဆီမှာက သူလိုချင်တဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီဆိုဒ် ကုန်နေပါတယ်။ တခြား ဂျင်းဘောင်းဘီ ပုံစံ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး
လိုက်ပြပေးပါတယ်။ သူက အခြားတစ်ခုကို လှမ်းဆွဲပြီး ဈေးနှုန်းကပ်တဲ့ Label လေးမရှိတော့ ကိုယ့်ကိုမေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘယ်လောက်မှန်းမသေချာဖို့ ဈေးနှုန်းကို ကွန်ပျူတာမှာ သွားစစ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လှမ်းထွက်မယ် အလုပ်မှာ တစ်ယောက်က စိတ်မရှည်စွာ သူတို့ Arabic လို ထဆဲပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆဲတယ်လို့ ပြောလိုက်ရပေမယ့် တို့ Arabic လို မတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို ဆဲမှန်းသိနေတယ်။ ခံစားနေရတယ်လေ။ ဗိုက်ထဲက ပုဏ္ဏားလေး ပြောပြတာပဲနေမှာပေါ့။ အဲဒီလူဆဲတော့ ဘေးက မန်နေဂျာမလေး ဖြတ်ကနဲ အဲဒီလူကို မျက်လုံးပြူးပြီး ကြည့်လိုက်သလို၊ တို့လည်းရပ်ပြီး သူ့ကို ဖျတ်ခနဲ ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက် ပါတယ်။ ကိုယ်ကလဲ သူ့ကို စိတ်ရှည်ရှည် လိုက်ကူညီပေးရသေးတယ်။ အဲလို ဘလိုင်းကြီးထဟောင်တာတော့ Angel Shaper မခံစားနိုင်ပါဘူး။ တော်တော်ဒေါသထွက်မိပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေ ဆုံးမထားတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ "သမီး။ သူများတွေက သမီးကို ဘယ်လိုပြောပြော၊ ဆဲဆဲ သည်းခံတတ်ပါစေ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ အလွန်ဆုံး ချီးထုတ်လေး၊ ခွေးမလေး ပြောရင်တောင် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကွယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါ့သမီးက ချီးထုတ်မှ မဟုတ်တာ။ ခွေးမလေးမှ မဟုတ်တာနော်" လို့ အရာရာမှာ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ပြီး၊ ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ တို့ကို ဖေဖေ အဲလို ဆုံးမခဲ့ဖူးပါတယ်။ တို့ ရဲ့ Shaper ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကို၊ အဘ၊ ဘကြီးမိုး ကလဲ ခံစားလွယ်၊ စိတ်တိုလွယ်တဲ့ တို့ကို "Try To Watch Your Feeling And Know That What Your Mind's Happening, So That You Can Control Yourself " ဆိုပြီး သေချာဆုံးမထားဖူးပါတယ်။ အဲလို ဆုံးမ ခဲ့ကြပါရက်နဲ့ ဒီနေ့စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြန်ရန်စွာမိတဲ့ အတွက် ဒီနေရာ ကနေ သူတို့ကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ကို စိတ်ထိန်းနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ မချင့်မရဲ ဂတိထပ်ပေးပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ အင်မတန် ဒေါသထွက်မိတာ အမှန်ပါ။ ဘာသိဘာသာ နေလိုက်ရင် ရမဲ့ ကိစ္စလေးပါ။ ဒါပေမယ့် မနေတတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကို ပြန်ပြောမိပါတယ်။ "တို့ကို အဲလိုမဆဲပါနဲ့။ လူလိုပြောပါ။ နားလည်အောင်ပြောပါ။ တို့ဟာ ဒီမှာ ဈေးဝယ်သူကို ကူညီဖို့အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ စကားမျိုး သုံးပြီး မစော်ကားပါနဲ့" လို့ပြန်စွာမိပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ့်ကို အဲလို ထဆဲစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိတာပါ။ သူ့ဟာသူ Local မကလို့မိုက်ကယ်လ် ဖြစ်နေရင်တောင် လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ မကြောက်ပါဘူး။ (ရန်ကုန်မှာ Kick Boxing ထိုးလာ ခဲ့သူပါ။ Akido လည်း နဲနဲ ရသေးတယ်။ ဟဟားးးး သူတို့လောက်တော့ မဖြုံပါဘူး။ မလန့်မိပါဘူးလေ။) Angel Shaper ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။ အလုပ်ကိုလဲ သိက္ခာတရား၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ကောင်းမွန်စွာ ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါတယ်။ သူတို့စိတ်ရှိတိုင်း အသားလွတ်ဆဲတာ ခံနေရအောင် ကိုယ်ဟာ အပေါစား ဈေးသည်၊ အောက်တန်းစား ဈေးသည်လည်း မဟုတ်သလို၊ မကောင်းတာ လုပ်စားနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို အဲလို ဆဲတာ မကြိုက်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကိုယ်လဲ မဆဲပါဘူး။
ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်လို့ဒူဘိုင်းကိုလာတာပါ။ Angel Shaper ဒီလို နိုင်ငံကို လာပြီး အလုပ်လာလုပ်ဖို့ ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လာတာပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ အဝေးသင်ဘွဲ့လေး တစ်ခုတောင် မယူခဲ့ရတဲ့ တို့ ဟာ ရန်ကုန်မှာ IELTS ဖြေပြီး နိုင်ငံခြားကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ထွက်လာခဲ့တာပါ။ ကျောင်းလခတွေလည်း သွင်းပြီး သွားပါပြီ။ အားလုံး ဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမယ့် ဗီဇာ တင်တဲ့ နေရာမှာ မပြည့်စုံလို့ နောက်နှစ် စာသင်နှစ် ရွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီ တစ်နှစ် အတွင်း ဘာသင်တန်းတွေ တက်ရမလဲ၊ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ စုံစမ်းရင်းနဲ့ အလုပ်အင်တာဗျူးခေါ်တာတွေ့တော့ လျှောက်ကြည့်တယ်။ အင်တာဗျူးကို ဘာရယ်မဟုတ် အတွေ့အကြုံရအောင် ဝင်ဖြေကြည့်မိပါတယ်။ အတူဖြေတဲ့ သူတွေက ဘွဲ့တွေလည်းရပြီး အလုပ် အတွေ့အကြုံ ဘယ်စင်တာ၊ ဘယ်ပလာဇာ၊ ဘယ်ဆိုင်မှာ ဘယ်နှနှစ် အတွေ့အကြုံရှိ၊ ဆိုတာတွေ မြင်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကျတော့ ၁၀တန်းအောင်ပြီး ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဖူးဘူး။ ကျောင်းတက်ဖို့လုပ်နေဆဲလူတစ်ယောက်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ ရယ်ရတာပေါ့လေ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ Area Manager ကိုယ်တိုင် ဒူဘိုင်းကနေလာဗျူးတာပါ။ သူက အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာ တစ်ခုမှ မမေးပါဘူး။ မေးရင်လဲ ဖြေတတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲလိုနဲ့ ဒူဘိုင်းကို သွားရမှာနော်တဲ့။ အင်တာဗျူးဖြေဖို့ လာကတည်းက ဒူဘိုင်းဆိုတာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ဒေသ တစ်ခုခုလို့ထင်ထားခဲ့လို့ လာလျှောက်တာပါ။ ဟဟားးး အဲလောက် ဗဟုသုတ ကြွယ်ပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ အင်တာဗျူးအောင်တယ်ပေါ့။ ဗီဇာကျပြီလဲဆိုရော စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ ၃၊ ၄နှစ် ကျောင်းသွားတက် ပြီးရင် အလုပ်ကို လုပ်ရမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီ ၃၊ ၄ နှစ်မှာ ကုန်ခဲ့တဲ့ငွေတွေကို ပြန်ရှာဖို့ တော်တော်လေး ပြန်ကြိုးစားရမယ်။ အတွေ့အကြုံလည်းလိုအပ်လာမယ်။ ခုမထင်မှတ်ပဲ အလုပ်ရတော့ လုပ်ကြည့်မှပါပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်က တစ်နှစ်ကြီးတောင် အားနေတာပဲ။ မုန့်ဖိုးတောင် စုဖြစ်ဦးမယ် ဆိုပြီး ဖေဖေ့ကို ဖုန်းဆက်၊ အိမ်ပြန်ပြီး အားလုံးကိုနှုတ်ဆက် ဆုံးမစကားတွေနာယူပြီး ထွက်လာခဲ့တာပါ။ တကယ်ဆို မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ကလေးဆိုးသာသာတို့ကို အဘွားဆို ခုထိ စိတ်မချပါဘူး။ ပြောချင်ရာပြော၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ ခပ်စွာစွာ ကလေးတစ်ယောက်ပါဆိုပြီး တဖွဖွနဲ့ အဆင်ပြေ၊ မပြေ စိတ်ပူကြတုန်းပါ။ ဒီအသက် ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီကိုလာပြီး အလုပ်လာလုပ်တာ မချမ်းသာတဲ့ တို့ရဲ့မိသားစု အတွက်သက်သက်ပါ။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ အဘွား၊ အဖေနဲ့အမေ မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေနဲ့ မကျန်းမာတဲ့ ဦးလေး မိသားစု၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မုဆိုးမ ဖြစ်ရရှာတဲ့ အဒေါ်တို့ သားအမိ၊ မိသားစုအားလုံး အတွက် အနစ်နာခံပြီး ကြိုးစားနေတဲ့၊ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ စကာင်္ပူက တို့ရဲ့ အဒေါ်၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့ ဒေါ်လေးတို့အတွက်ပဲ ကြိုးစားပြီး စွန့်စားချင်မိတာပါ။
Angel Shaper ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက အရမ်းကြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝ ချင်တဲ့ ဆန္ဒလဲ မရှိလှပါဘူး။ လှချင်ပချင်တာ၊ ဝတ်ချင်စားချင်တာ၊ ဟိုဟာလိုချင် ဒီဟာလိုချင်တာ သိပ်မရှိသလောက်ပါပဲ။ အလှအပအတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေ အကုန်ခံပြီး ဘာမှ ထူးခြားလာမှာမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ရူပကာအစွမ်းကို သိထားလို့ စိတ်မဝင်စားမိတာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆို တစ်ချို့  အလှပြင်ဘူးတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို ဖွင့်တောင် မဖွင့် တတ်ပါဘူး။ ဟဟားးး အဲလောက်ကို မိန်းမဆန်ပါတယ်။ Angel Shaper ဟာ သီချင်းလေးတွေရယ်၊ ဂစ်တာ တစ်လက်ရယ် ရှိပြီး၊ ရေခဲမုန့်ပုံမှန်စားနေရရင် ကျေနပ်နေသူ။ ရော့ခ်သီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ကော်ဖီ ကောင်းကောင်း တစ်ခွက် ရှိနေရင် ပြည့်စုံတယ် ထင်တတ်သူပါ။
ခုချိန်မှာ မိသားစုကို လိုချင်တဲ့ ပုံစံရောက်အောင် ပြန်မလုပ်ကျွေးနိုင်သေးတာကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလို အားမရ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကြိုးစားရဦးမယ် ဆိုတာကိုတော့ နှလုံးသွင်းပြီး အားမွေးထားပါတယ်။ ဒီအလုပ်က ကိုယ့်အတွက် ပထမဦးဆုံး အလုပ်အတွေ့အကြုံဆိုတော့လဲ အင်မတန် ညစ်စရာတွေ များပါတယ်။ ဒီလို မိသားစု အတွက်ပဲ စွန့်စားချင်တဲ့ အတွက် ဘယ်လို အခက်ခဲ ပဲရှိနေပါစေ၊ သူတို့ အားလုံး အတွက် လုပ်နေရ တာပဲ ဆိုတာတွေးကြည့်မိရင် ပိုပြီးသည်းခံလာနိုင်သလို၊ အကုန်လုံးနီးပါး အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ကြိုးစားချင် စိတ်လည်း ပိုရှိလာပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မောင်အငယ်ဆုံး သားငယ်လေးက ဘယ်လိုစာရေးပြီး အားပေးသလဲဆိုရင် "မမရေ... အဆင်ပြေလား၊ ကျွန်တော်တို့ ညတိုင်း ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။ ဘာမှအားငယ် နဲ့ သိလား။ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မကြောက်နဲ့နော်။ အိမ်မှာလိုပဲ ခပ်စွာစွာနေ သိလား" တဲ့။ Angel Shaper မျက်ရည်တောင် ဝဲခဲ့ရတဲ့ အားဆေး တစ်ခွက်ပေါ့။
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃၊ ၄ လောက်က တို့ ဆိုင်ကို ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘော့စ်ဆိုသူ လာပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ မန်နေဂျာရဲ့ နားရက်ပါ။ တစ်နေ့ကပဲ ဒီနွေရာသီမှာ မရောင်းရတဲ့ အနွေးထည်တွေကို အပြင်မထုတ်ပဲ Stock Room ထဲမှာပဲ ထည့်ထားမိကြတာပေါ့။ သူအင်မတန်ဒေါသထွက်ပါတယ်။ ရှိသမျှ လူအကုန်ခေါ်ပြီး ဆူပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီဂျာကင် အားလုံး ဒီထဲရောက်နေတာလဲလို့ တို့ကို မေးတယ်။ "ဒါတွေကို သမီးတို့ မန်နေဂျာက အထဲ ခနထားမယ် ဆိုလို့ ထားတာပါ" လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူက "ဒါဆို ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချလို့ ငါခိုင်းရင် ခုန်ချမလား" တဲ့။ တော်တော် အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ စကားပါ။ "မခုန်ပါဘူး။ ဘာလို့ ခုန်ချရမှာလဲ။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတာ" ဆိုတော့။ သူက "ဘာလို့ လဲ" တဲ့။ "ရော် သေမှာပေါ့ဗျ" လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်လေ။ သူက "ကဲ အဲလိုနင်တို့် ကို နာကျင်မယ် ဆိုတာသိတတ်ရင်၊ နင်တို့ခုလို ပေါ့ရော့တာ ငါ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။ င့ါကို နာကျင်စေတယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလား" တဲ့။ "အယ်... ဒါကတော့ မန်နေဂျာက အဆင်ပြေအောင် လုပ်တာလေ။ ထားစရာနေရာလဲ မရသေးလို့ပါ" လို့ ပြန်ပြောတော့။ "ဒါဆို နင်တို့မန်နေဂျာထက် ငါ ပိုပြီး အာဏာရှိတယ်ဆိုတာ မြင်ချင်တာလားတဲ့ (အရေးထဲ အာဏာရူးနဲ့ လာတွေ့နေတယ်။ တို့ကြားဖူးတဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက အုပ်ချုပ်သူလို စိတ်မျိုး ဝင်နေသေးတယ်။ အာဏာလိုချင်တာ၊ ပြချင်တာ ကိုပြောတာပါ)။ လုပ်ပြမယ်တဲ့။ Dim မင်းကို နောက်တပတ် အိမ်ပြန်ပို့မယ်" တဲ့။ မဆီမဆိုင်လေ.... ပျော်ပျော်ကြီးပေါ့။ ကြားချင်တာကြာပေါ့ ထိုစကား။ တို့အပြုံးမပျက် "ဟုတ်ကဲ့။ အိုကေ။ ပို့ပါ။ ပြန်မယ်" လို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စလေးနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ မှာလား၊ ပို့ စမ်းပါလားဗျာ။ ပျော်လွန်းလို့ ကပြီးတောင် ပြန်မယ့်သူပါ။
သူက ပြောပါသေးတယ်လေ... "နင်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေဈေး ဘယ်လောက် ရှိတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ် ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်" ဘာညာနဲ့ တို့နိုင်ငံကိုများ ရာရာနဲ့ စစ သူက အထင်သေးတဲ့စကား၊ စော်ကားချင်တဲ့ စကားတွေ လာပြောနေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အမိမြေထိရင် မခံတဲ့ Angel Shaper ပါ... ပြန်ပြောပါတယ်။ "ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် သမီး ဒီကိုမလာခင် အလုပ်မလုပ်ဖူးသလို အလုပ်မရှိပါဘူး။ သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေပဲ တက်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန် သမီးတို့အိမ်မှာ ထမင်းကို ပုံမှန်စားနိုင်သလို လူလိုသူလိုဝတ်ရပါတယ်။ ခု သမီး ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ် တယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေ ချမ်းသာမသွားပါဘူး။" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရင်တောင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ငတ်သေမသွားဘူး ဆိုတာ ပြတာပါ။
သူက အံ့သြပါတယ်။ "Dim, I'm not Making you Fun, I'M Telling You Seriously" တဲ့။ "ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဟုတ်ပါပြီ၊ အိုကေပါတယ်။" ဆိုပြီး ပြုံးပြုံးလေးပါပဲ။ အတူတူ အဆူခံရတဲ့ ဖားမကတော့ ငိုပြပါတယ်။ မပို့ပါနဲ့ပေါ့။ Angel Shaper ကတော့ မပြောပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားတယ်လို့ မှ မထင်တာ။ မန်နေဂျာအနေနဲ့လည်း အဓိပ္ပာယ်မရှိပဲ၊ ဒီလိုမလုပ်ဘူး ဆိုတာ ယုံကြည်ထားတယ်။ အကြောင်းရှိလို့ အထဲ ခနပို့ တာပဲလေ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဘောစ့်ဆိုသူက "နောက်တစ်ခါ မင်းတို့ မန်နေဂျာ လုပ်ခိုင်းတိုင်း လိုက်မလုပ်ပါနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး ထင်ရင် မေးပါ။" လို့ ပဲ နောက်ဆုံး လေပြေပြန်ထိုးသွားပါတယ်။
Angel Shaper ပြောချင်တာက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ခက်ခဲနေပေမယ့် တစ်ခုခု ရှာကြံလုပ်ပြီး နေထိုင်စားသောက်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဒီလို သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်တာဟာလည်း အနဲဆုံး ပိုက်ဆံ ပိုရမယ်၊ ပိုစုမိမယ် ထင်လို့လာခဲ့ကြတာမလား။ ကျွန်လာခံတာမှမဟုတ်တာ။ အလုပ်လာလုပ်တာပါ။ ဒီလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ် လာလုပ်တာကို လူသားချင်းချင်း လာနှိမ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Angel Shaper လက်မခံတတ်ပါဘူး။ ကိုယ် ကောင်းတယ်ထင်ရင်လဲ ငြိမ်ခံမနေပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်တာပါ။
Angel Shaper ဒီပိုစ့်ရေးတာ အင်မတန် ခံပြင်းလွန်းလို့ရယ်။ နောက်မှရောက်လာတဲ့ မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်တွေ ဂျူနီယာလေးတွေကိုအဓိက ပြောချင်တာပါ။ သူများ ဘာပြောပြော ငြိမ်ခံပြီး အလျော့မပေးစေချင်တာပါ။ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးစားပါ၊ အမှားနည်းအောင်လည်း ကြိုးစားလုပ်ပါ။ အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူများ လေးစားအောင်ကြိုးစားပြီး ကျင့်ကြံနေထိုင်ပါ။ အပြောမခံရအောင်လည်း နေပါ။ လာပြောရင်လဲ မခံပါနဲ့။ အထိခိုက်မခံပါနဲ့ ။ အနှိမ်မခံပါနဲ့။ အလုပ်လုပ်တာ သခင်လိုပဲလုပ်ပါ။ ကျွန်လို မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်လည်းလူ၊ သူလည်းလူပါ။ လူဟာလူပဲ ဘာမှမကွာပါဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အချင်းချင်း တောင် ပညာပြ၊ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူတွေ ကြားရ၊ တွေ့ရပါတယ်။ Angel Shaper ကတော့ လုံးဝကို အနိုင်ကျင့် မခံသလို၊ ကိုယ်လဲ ပြန်မလုပ်တတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ ဇွတ်မှိတ် အထင်မကြီးသင့်သလို၊ ခေါင်းငုံ့ခံပေးစရာလည်း မလိုဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ လူလူချင်းဟာ လူစိတ်မွေးပြီး Respect ပေးသင့်တယ် လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ပဲလေ။ ဘာကိုမှ မကြောက်ပဲ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကြစေချင်ပါတယ်။ Angel Shaper တော့ တော်တော် ဆရာလုပ်တာပဲလို့ မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ရင်ဘတ်ထဲက စေတနာမေတ္တာနဲ့ ခံပြင်းစိတ်လေးတွေကို နားလည်ပေးကြပါကုန်...........
အားလုံး အဆင်ပြေလို့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
29.8.09 ( Sat; )